That's so good, right?: December 2011
ဒီနေ့ဟာ ၂၀၁၁ ခုနှစ်ရဲ့နောက်ဆုံးရက်ပါ။မကြာခင်သောအချိန်မှာ ၂၀၁၂ခုနှစ်ကိုကူးပြောင်း ပါတော့မယ်။ ဘာလိုလိုနဲ့ ကျွန်တော် စာတွေရေးခဲ့တာ သုံးလေးနှစ်လောက်ရှိပါတော့ပြီ။ ကျွန်တော့်စာတွေဖတ်လို့အကျိုး ဘာရှိလဲလို့မေးကြမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော် ကဖြေဖို့အသင့်ပါ။ ကျွန်တော်ဘယ်သူ့ ၊ ဘာအတွက်ဆိုပြီးရည်ရွယ်ကာစာတွေမရေးခဲ့စဖူးပါ။ ကိုယ်ဖတ်တာ ကိုယ်သိတာ ကိုယ်ခံစားနေရတဲ့အရာတွေကို သူငယ်ချင်းများအားပြန်လည်ဝေမျှလိုရင်းသက်သက်ဖြင့်သာစာတွေ
ကိုရေးခဲ့ကြောင်းပြောပါရစေ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူငယ်ချင်းတို့ရေ...
Successful Saturday and
Great beginning for January,
Joy for June and July,
Achievements for August,
Harmony for September,
Good Fortune for October and November,
Happiness for December,
HaveaGreat Year....
Alex Aung (31 December 2011)
Posted by Alex Aung at 7:42 PM No comments:
Penile Injection Therapy ကျားလိင်အင်္ဂါ ဆေးထိုးခြင်း
အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ (၈၂)
• Erectile dysfunction (ED) ခေါ်တဲ့ ပန်းသေ-ပန်းညှိုး ဖြစ်နေတဲ့
ယောက်ျားတွေကို လိင်အင်္ဂါမှာ ဆေးထိုးကုသဘို့ FDA ကနေ ပဌမဆုံး
• ၁၉၇၇ ခုနှစ်မှာ ခွဲစိတ်ဆရာဝန် တဦးကနေ Papaverine ဆေးကို အမှတ်မထင်
စတွေ့တာ ဖြစ်တယ်။ ကြောင်တွေကို Phentolamine (Regitine) ဆေး
• ၁၉၈၂ မှာ ပြင်သစ် ဆရာဝန် Dr. Virag ကနေ Papaverine ဆေးကို တွေ့လာခဲ့တယ်။
• ၁၉၈၃ မှာ လန်ဒန်က ပါမောက္ခ Dr. Brindley ကနေ ပန်းသေနေသူ ၁၁ ဦးကို
ဒီဆေးထိုးပေးတော့ လိင်ဆက်ဆံနိုင်ကြတာ တွေ့လာခဲ့တယ်။
• Papaverine ဆေးကို Alzheimer's disease ရောဂါနဲ့ Multiple Sclerosis
ရောဂါတွေအတွက်လဲ သုံးတယ်။ Tumors of the adrenal glands ရောဂါရှာရာမှာ
• Papaverine နဲ့ Phentolamine ကို ၁၉၈၃ ကတည်းက သုံးခဲ့ပြီး၊
Prostaglandin E1 ကို သုံးတာ မကြာသေးဘူး။
• စမ်းသပ်မှုတွေအရ ၈ဝ% မှာ သိသိသာသာ ကောင်းစေတယ်။
• တဦးချင်းအတွက် ဆေး ဘယ်လောက်ပေးရမယ်ဆိုတာ ချင့်ချိန်နိုင်တယ်။
• တခြားရောဂါတွေ ရှိနေသူတွေကိုလဲ အတော်များများ ထိုးပေးလို့ရတယ်။
• လိင်တံကို ဆေးထိုးပေးလိုက်ရင် အထဲက သွေးကြောတွေကို ကျယ်လာစေမယ်။
• ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးတွေကို ၃၇% ကနေပြောလာတာတွေဟာ ဆိုးဝါးတာတွေ မပါဘူး။
• နာတာတို့ ဆေးထိုးအပ်ရာတော့ ရှိမယ်။ ခေါင်းမူးတာ၊ ခေါင်းကိုက်တာ ရှိနိုင်တယ်။
• ရှားရှားပါးပါး Priapism ဆိုတဲ့ လိင်တံတောင့်တင်းနေတာ ၄-၈ နာရီ
ကြာလို့တောင်မှ ပြန်မကျတာမျိုး ဖြစ်တတ်တယ်။ Prostaglandin E1 ကတော့ အဲလို
• နှလုံးရောဂါအတွက် Cardiologists and surgeons ဆရာဝန်တွေက Papaverine
120 mg ကို ၃ နာရီတခါ သွေးကြောထဲ ထိုးပေးတယ်။ လိင်တံကို ဆေးထိုးတာကတော့
30 mg ကို တပါတ် ၂ ခါသာ ထိုးတယ်။
• Phentolamine ဆေးကို များများပေးရင်တော့ သွေးဖိအား BP ကျစေနိုင်တယ်။
နှလုံးခုန်မမှန်တာ၊ ဝမ်းပျက်တာ၊ ဗိုက်အောင့်တာတွေ ဖြစ်နိုင်တယ်။
• ဆေးထိုးတာ မနာအောင် 30 gauge ultra-fine needle အပ်သေးသေးလေး သုံးသင့်တယ်။
• Papaverine နဲ့ Phentolamine ဆေးက မနာဘူး။ Prostaglandin E1 ကတော့ နဲနဲ
ထူပူနာတာ ၁၅ မိနစ် လောက် ဖြစ်နေနိုင်တယ်။
• ဆေးထိုးပြီးနောက် ၅-၁၅ မိနစ်မှာ အစွမ်း ပြတယ်။ Prostaglandin E1 ကပိုမြန်မယ်။
• Foreplay လိင်ဆက်ဆံဘို့ ပဌမပိုင်း စပြီးနောက် သတ္တိပြမယ်။
• ဆေးအစွမ်းက မိနစ် ၃ဝ ကနေ တနာရီ၊ ဒါမှမဟုတ် Orgasm ရတဲ့အထိ ကြာနေမယ်။
• တလကို ၁ဝ-၁၂ ခါသာ ထိုးစေတယ်။
• Papaverine နဲ့ Phentolamine ဆေးကို ဖျော်ထားပြီးနောက် ၆ဝ ရက် ထားလို့ရတယ်။
• လူနာကိုယ်တိုင်က ဆေးထိုးနည်းကို သင်ယူပြီး ဖါသာထိုးနိုင်တယ်။ (ဒီစာမှာ
ကျွန်တော် လွန်ခဲ့တဲ့ ၆ နှစ်က လိင်တန်ကြီးအောင် ဆေးထိုးထားပါတယ်။
ဆေးထိုးပြီးစကတော့ မကြာခဏဆိုသလို ဖောင်းလာလိုက် ပြန်ကျသွားလိုက် တခါတလေ
အရမ်းကြီး နာကျင်နေတာတွေ ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုနောက်ပိုင်းတော့
အဲ့လိုတွေ မဖြစ်တော့ပါဘူး။ အဖျားပိုင်းမှာပဲ ဆေးထိုးထားတဲ့ အရည်တွေ
စုနေတယ်နဲ့တူတယ် အဖျားပိုင်းမှာ ကြီးနေတယ်။ ထပ်ဖျားကို အောက်ဆွဲချလို့
မရဘူး။ ဆက်ဆံတာတော့ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သေးပေါက်ရင်
သေးကအကုန်မထွက်ပဲနဲ့ နည်းနည်း ကျန်နေတယ်။ သုတ်လွှတ်ရင်လဲ ပန်းမထွက်ဘူး။
နည်းနည်းချင်းကျတယ်။ ဒါကို ဖြတ်လိုက်ရမလား။ ဖြတ်ရင် အရင်လို
ပြန်သေးသွားမလား။ ဖြတ်လည်းဖြတ်ချင်တယ်၊ ကြီးလည်းကြီးချင်တယ်။
ကျွန်တော် ဆေးထိုးတာက တကြိမ်ထဲပါ။ ဘာဆေးလဲတော့ မမှတ်မိဘူး။ ထိုးတာက
ယိုးဒယား (မယ်ဆိုင်) မှာပါ။ ဖြတ်ချင်တယ် ဆိုတာက အရေပြားကိုပါ။
အရေပြားလှန်လို့ မရရင် အန္တရာယ်ရှိတယ်ထင်လို့ပါ။ အရေပြား ဖြတ်ပြီး ဆေးတွေ
ခြစ်ထုတ်လိုက်ရင် အရင်အတိုင်း ပြန်ဖြစ်တယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။ ဒါဆိုရင်
သေးသွားမှာပေါ့။ ကျွန်တော်က နဂိုက တော်တော်သေးပါတယ်။ အခုအနေအထားက်ို
ကျွန်တော် ကြိုက်တယ်။ မိန်းမကလည်း သဘောကျတယ်။ ဖြတ်ပြီးခြစ်လိုက်ရင်
သေးသွားမှာ သူကလည်း စိုးရိမ်တယ်။ ဒါကြောင့်ပါ။ အကောင်းဆုံးကို
ရှင်းရှင်းသိရတော့ ပြောရတာ ပိုကောင်းလာတယ်။ ဆေးတခါထဲ ထိုးခဲ့တယ်ဆိုဆော့
မဆိုးပါဘူး။ အရေပြား လှန်မရတာ ကွမ်းသီးခေါင်းကို ဆွဲလှန်လို့မရတာကို
အတိအကျတော့ သဘောမပေါက်သေးဘူး။ ဒါပေမဲ့ အကြောင်းမဟုတ်ပါ။ အရေပြား
လှန်ရဘူးလို့ ပြောကြတာက ပန်းငုံတဲ့သဘော ဖြစ်တယ်။ ဆီးလဲ ကောင်းကောင်း
သွားနိုင် ဆက်ဆံရာမှာလဲ အခက်အခဲ မရှိဘူးဆိုရင် ဒီအတိုင်း ထားနိုင်ပါတယ်။
သေခြာ စစ်ဆေးကြည့်ရမှသာ ခွဲလို့ကောင်း-မကောင်း ပိုပြောနိုင်ပါမယ်။
ခွဲမယ်ဆိုရင်လဲ အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ ဆရာဝန်ဖြစ်မှ ကောင်းမယ်။ ခက်တာတော့
မဟုတ်ပေမဲ့ ခွဲပြီးနောက် အရင်လိုဆက် အဆင်ပြေနေဘို့က ပိုအရေးကြီးလို့
ထည့်တွက်စရာတွေကို အသေအခြာ လုပ်ရမှာမို့ ပြောတာပါ။
Posted by Alex Aung at 9:33 PM No comments:
လိင် ဆက်ဆံသူတွေအကြား အိတ်ခ်ျအိုင်ဗီ ကူးစက်မှုအသစ်တွေတိုးပွားနေ
အိတ်ခ်ျအိုင်ဗီကူးစက်မှု အသစ်တွေဟာ လိင်ဆက်ဆံသူတွေ၊ မှုယစ်ဆေးဝါး
သုံးစွဲသူတွေနဲ့ပြည့်တန်ဆာတွေကြားမှာ တိုးလာနေတယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂ
အေအိုင်ဒီအက်စ် တိုက်ဖျက်ရေးဌာနအကြီးအကဲက တနင်္လာနေ့ကပြောသည်။
ယူအင်န် အေအိုင်ဒီအက်စ် (UNAIDS) အကြီးအကဲ မိုက်ကယ် ဆီဒီဘီက
လိင်တူချင်းဆက်ဆံမှုကို သေဒဏ်ချမှတနိုင်တဲ့ နိုင်ငံ ခုနစ်နိုင်ငံ အပါအဝင်
၈၅ နိုင်ငံဟာအရွယ်ရောက်သူတွေအကြား လိင်တူဆက်ဆံမှုကို ရာဇဝတ်မှုအဖြစ်
သက်မှတ်တဲ့ ဥပဒေတွေရှိတယ် ဆိုတာ လက်မခံနိုင်စရာ ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။
သူက မိန်းမလျာ အချို့ အတွက်သေဒဏ်ချမှတ်မှာဖြစ်တဲ့ အဆိုပြု ထားတဲ့ ယူဂန်ဒါ
ဥပဒေကို အလွန် ဆိုးရွားတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပြီး ၎င်း ဥပဒေဟာ လုံးဝ ထောက်ခံမှု
ရရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့မျှော်လင့်မိကြောင်း ထုတ်ဖော် ပြောဆိုသည်။
UNAIDS က သူရဲ့ အစီအစဉ် တွေကို မြှင့်တင်နေပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝန်း
အိတ်ခ်ျအိုင်ဗီကုသမှု ရရှိရေးကို ကြိုးပမ်းနေတဲ့ အခါသမရမှာ
မရနိုင်အောင် ဖြစ်စေတဲ့မကောင်းတဲ့ဥပဒေတွေကို နိုင်ငံတွေက ချမှတ်
နေတာကြောင့် သူအနေနဲ့ အလွန်ထိတ်လန့်နေရတယ်လို့ ဆီဒီဘီက ပြောပါတယ်။
လူနည်းစုတွေရဲ့ အခွင့်အရေးကို လက်ကိုင်ထားဖို့ ကျွန်တော်တို့
မဖြစ်မနေတောင်းဆိုရမှာပါ။ ဒီလို မလုပ်ဘူး ဆိုရင် ကူးစက်ရောဂါဟာ
ထပ်ပြီးကြီးထွားလာဦးမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ လူအများစုရဲ့ နိုင်လိုမင်းထက်
ပြုမှုကို ကျွန်တော်တို့လက်မခံနိုင်ပါဘူးလို့ သူက သတိပေးခဲ့ပါတယ်။ ဆီဒီဘီက
တရုတ်ကစလို့ ၊ ကင်ညာနဲ့မာလာဝီနိုင်ငံအဆုံး နိုင်ငံတွေမှာ အိတ်ခ်ျအိုင်ဗီ
ကူးစက်မှု အသစ်တွေရဲ့ ၃၃
ရာခိုင်နှုန်းဟာ လိင်တူ ဆက်ဆံတဲ့ အမျိုးသားတွေမှာ ဖြစ်နေပြီး ၊
သိသိသာသာတိုးလာတယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂ ဖောင်ဒေးရှင်းက ပြုလုပ်တဲ့
နေ့လည်စာဧည့်ခံပွဲတစ်ခုမှာဂျာနယ်လစ် တွေကို ပြောပါတယ်။
ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့ နိုင်ငံ အများစုက နှိပ်ကွက်တဲ့ ဥပဒေတွေ မရှိတဲ့
ကာရစ်ဘီယံဒေသမှာ အိတ်ခ်ျအိုင်ဗီကူးစက်မှု အသစ်တွေရဲ့
သုံးရာခိုင်နှုန်းနဲ့ခြောက်ရာခိုင်နှုန်းသာလျှင် လိင်တူ ဆက်ဆံသူ
အမျိုးသားတွေ ဖြစ်နေတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ နှိပ်ကွပ်တဲ့ ဥပဒေတွေရှိသလို၊
မိန်းမလျာ အသိုင်းအဝိုင်းမှာအေအိုင်ဒီအက်စ်လို ပထမဆုံး တိုက်ဖျက်ခဲ့တဲ့
အမေရိကန်မှာတောင် ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်က
အိတ်ခ်ျအိုင်ဗီကူးစက်မှု အသစ်တွေရဲ့ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်က
လိင်တူဆက်ဆံသူတွေကြားမှာ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ တုန်လှုပ်ဖွယ်ရာ ဖြစ်တယ်လို့ဆီဒီဘီက
ဒါ့အပြင် သူက အသက် ၁၉ နှစ်မှ ၂၅ နှစ်အရွယ် အုပ်စုမှာ
ကူးစက်မှုဟာပိုမိုမြင့်မားတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုမှာ
တစ်ကျော့ပြန်လည်လာသလိုထင်ရပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် အနည်းငယ်က
ဖြစ်ပွားမှုတွေ မရှိသလောက်နီးပါးနောက်ပိုင်းလိုအပ်တဲ့ ကာကွယ်မှုနဲ့ သတင်း
အချက်တွေအားလုံးကိုမရှိတဲ့လူတွေအကြားမှာ ကူးစက်မှုအသစ်တွေ အထွတ်အထိပ်
ကျွန်တော်တို့ မြင်တွေ့နေရပါတယ် လို့သူကပြောပါတယ်။
သူက မှုးယစ်ဆေး သုံးစွဲသူတွေ ထဲမှာလည်း အရေအတွက်
တော်တော်များများဟာအိတ်ခ်ျအိုင်ဗီ ကူးစက်ခံ နေရတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဥရောပ
အရှေ့ပိုင်း နှင့်ဗဟိုအာရှမှာ ဖြစ်ပွားတဲ့ ကူးစက်မှု အသစ်တွေရဲ့ ၇၀
ရာခိုင်နှုန်းဟာမှုးယစ်ဆေးသုံးစွဲ သူတွေကြားမှာဖြစ်နေတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့
ရာဇဝတ်မှုမြောက်တယ်။သူတို့တွေက အကူအညီကို မရကြဘူး။ သူတို့ဟာ ပုန်းလျှိုး
သူကပြောပါတယ်။ နေ့စဉ် အိတ်ခ်ျအိုင်ဗီ ကူးစက်မှု အသစ် ၁၀၀၀
လောက်ရှိနေတဲ့နိုင်ဂျီးရီးယားမှာ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း ကျော်ဟာ မှုယစ်ဆေးဝါး
သုံးစွဲသူ တွေ၊လိင်တူဆက်ဆံသူတွေမှာ ဖြစ်နေတယ်လို့ သူက ပြောပါတယ်။
Hikmah.info - လိင် ဆက်ဆံသူတွေအကြား အိတ်ခ်ျအိုင်ဗီ
Posted by Alex Aung at 6:52 PM No comments:
သုတ်ဖယ်ပစ်လိုက်တယ်။ ကျွန်တော်က ကျော်ကျော်ရဲ့ လက်ထောက်
အဖြစ်အလုပ်လုပ်ခဲ့တာ တစ်လလောက်ရှိပါပြီအခုဆိုရင်။ ကျွန်တော်တို့
မော်ဒယ်လ်တွေနှင့် အလုပ်လုပ်ရတိုင်း တွေကိုပြန်ပြန်တို့လိမ်း ပေးရတာ၊
မှဲ့တွေကို ဖုံးအုပ်ပေးရတာနှင့် ၀က်ခြံတွေကို ဖုံးကွယ်ပေးရတာကို
ကျွန်တော်လုပ်ပေးရပါတယ်။ ဒီနေ့ Mountaineer Jeans အတွက်
အခြေတည်ထားတဲ့ရိုက်ကွင်းပေါ့။ Mountaineer က သူတို့ထုတ် ကုန်ကို sexy
ပုံရိပ်တစ်ခုအသွင်ထင်ဟပ်ဖို့ ကြိုးစားနေခဲ့တာဆိုတော့ ဥက္ကာကို
သူတို့မော်ဒယ်လ်အသစ်အဖြစ် ရွေးချယ်ခဲ့ကြတယ်။ ကျွန်တော်လည်း
ဥက္ကာက အရမ်း HOT! သူက hot ဖြစ်တဲ့နေရာမှာ နာမည်တစ်ခုရှိခဲ့ရုံမက
ဟန်ဆောင်တာမဟုတ်တဲ့ သူ့ခံစားချက်ပုံရိပ်တွေကို ပြသရာ မှာလည်း
အရမ်းအောင်မြင်ပါတယ်။ ပခုံးတစ်ဝိုက် ကပိုကရိုဝေ့၀ိုက်ကျနေတဲ့
ဆံနွယ်မရှည်တရှည်တွေက လက်ကလေးနှင့်သပ်ပြီး ပုံသွင်း ပေးချင်အောင်
ဖိတ်ခေါ်နေသလိုပါပဲ။ မျက်ဝန်းနက်နက်တွေကလည်း အရည်လဲ့နေတာများ
ချစ်ရည်တွေရွှန်းလဲ့နေတယ်ဆိုတဲ့ စကားလုံး အတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ခိုင်မာတဲ့
သူ့မေးရိုးတွေကလည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိတာကို ဖော်ပြသလို
နုညံ့ပြီးပြည့်တင်း နေတဲ့ နှုတ်ခမ်းလွှာတွေကလည်း
နမ်းပါလှည့်လလို့ဖိတ်ခေါ်နေသလားပဲ။ သူ့ခန္ဓာကိုယ်က ကြွက်သားအဖုဖုနှင့်
ပြည့်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ အရပ်ရှည်ရှည်မှာ သူ့နေရာနှင့်သူ ဟာကွက်မရှိ
ကောက်ကြောင်းလှနေစေတာမျိုးဗျ။ ခြုံငုံပြောရရင် ဗလမောင်
ကျွန်တော် အတော်ကြည့်ကောင်းတဲ့အမျိုးသားလေးတွေနှင့် အရင်က
ကံကောင်းစွာတွေ့ဆုံဖူးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဥက္ကာလို နဂိုမျိုးရိုးဗီဇအခံ
ကြောင့် ပြည့်စုံတဲ့အမျိုးသားလေးမျိုးလိုလူကို မတွေ့ဆုံဖူးခဲ့ပါ။ အခု
အဲဒီဥက္ကာရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်းလှလှအပေါ်ကို ကျွန်တော့်
လက်အစုံရောက်နေပါပြီ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျော်ကျော်က ဥက္ကာ ကိုယ်ပေါ်ရှိ
tattoo ကို မိတ်ကပ်နှင့်ဖုံးပေးဖို့ ပြောထားခြင်း ကြောင့်လေ။
ဥက္ကာ ကိုယ်ပေါ်မှာ tattoo တစ်ခုပဲရှိပါတယ်။ ကနုတ်ပန်း ခပ်ဆန်းဆန်း
ဒီဇိုင်းတစ်ခုက ညာဘက်တင်ပါး အပေါ်ပိုင်းမရောက်တစ်ရောက် ကနေ
ရှေ့ညာဘက်ဆီးစပ်နားရောက်တဲ့အထိ ထိုးထားတာ။ ကနုတ်ပန်းတွေက ကွေ့ဝိုက်ပြီး
အရှေ့ဘက်ရောက်နေတာဆိုတော့ ပုံမှန် ဆိုရင် အဲဒါက မမြင်နိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့
ဥက္ကာ Jeans တွေကို အောက်လျောချပြီး ၀တ်ကာရိုက်တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ်
ကြယ်သီးတွေကို ဖြုတ်ပြီးရိုက်တဲ့ရိုက်ချက်တွေမှာတော့ tattoo
မိတ်ကပ်လိမ်းရာအခန်းထဲမှာ ကျွန်တော် စိတ်နှင့်ကိုယ် သိပ်မကပ်ချင်ဘူး။
ကမ္ဘာပေါ်မှာ Hot အဖြစ်ဆုံးကောင်လေးရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာ
ကျွန်တော်ဘာပြောနိုင်မှာလဲ? 'Hi, ကျွန်တော်က ညီဇော်ပါ'
'ဟယ်လို...နေကောင်းလားဗျ' 'အစ်ကို့အလုပ်ကို သိပ်သဘောကျတာပဲ' 'ခရီးကလာရတာ
အဆင်ပြေရဲ့လား?' Hi, ကျွန်တော်က ညီဇော်ပါ။ အစ်ကိုနှင့် အလုပ်လုပ်ရ တာ
ဂုဏ်ယူပါတယ်' ဟူး...ပါးစပ်ကို ပိတ်ပြီး ဘာစကားမှမဆိုတာက
ပိုပြီးကောင်းမယ်ထင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့ကြည့်ရတာ မာနကြီးပြီး
မောက်မာတဲ့ပုံဟန်လည်း မရှိပါဘူး။ တစ်စုံတစ်ခုပြောဖို့
ကျွန်တော်ကြိုးစားနေမိခြင်းက ရူးတယ်လို့လည်းမဆိုသာပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆို
တော့ သက်ရှိထင်ရှား ဆွဲဆောင်မှုပြင်းအမျိုးသားတစ်ယောက်နှင့်
မေးခွန်းတစ်ခုလောက်မေးဖို့ပါးစပ်ဟလိုက်တုန်း ဥက္ကာက နောက်
ဘက်မှအသာဝင်လာတော့ ကျွန်တော့်မှာ ပြောစရာစကားလုံးရှာမရတော့။ ဒီလူဟာ
မယုံနိုင်စရာပါပဲ။ ကျွန်တော် အရင်က ပြည့်စုံလွန်းတဲ့
အမျိုးသားတစ်ယောက်ရဲ့ အလှကိုမမြင်ခဲ့စဖူး။ သူဟာ....
ရပ်နေမိ တာ ကြမ်းပြင်ပေါ်မေးရိုးပြုတ်ကျသွားတဲ့အတိုင်း။ ကျော်ကျော်က
တစ်ခုခုပြောနေတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် မကြားလိုက်တာ ဘာမှမဖြစ်
လို့တော်သေးတာ ဘယ်စကားလုံးမှကြားနိုင်စွမ်း မရှိချိန်မို့လေ။
အပေါ်ပိုင်း အ၀တ်မပါ၊ ပေါင်အစုံကို ကားကာ သက်သောင့်သက်သာဖြင့်
မိတ်ကပ်လိမ်းတဲ့ခုံမှာ ဥက္ကာထိုင်လိုက်တယ်။ မိတ်ကပ်လိမ်းဖို့ ထိုင်နေတဲ့
ဥက္ကာ ဦးခေါင်းမှာ အနက်ရောင် ဆံနွယ်မရှည်တရှည်တွေက ပခုံးတစ်ဝိုက်ကို
ဝေ့၀ဲကျလို့။ ဥက္ကာက တကယ့်ကိုလှပချော မွေ့သူပါပဲ။ ကျွန်တော့်နှုတ်ဖျားမှ
မသိမသာ အာမေဋိတ်သံတစ်ချို့တောင်ထွက်သွားမိရဲ့။ သူ့မျက်နှာကို
ဒါရိုက်ထိုးထားတဲ့ မီးရောင်ဟာ အချိုးကျတဲ့ မေးရိုးတွေရဲ့ ခိုင်မာမှုကို
မထင်ရှားနိုင်စေခဲ့ပါ။ ဥက္ကာဟာ တကယ်တမ်းတော့ မိတ်ကပ်လိမ်းဖို့ကိုမလို၊
ကပိုကရိုဖြစ်နေတာ ကို လိုချင်တဲ့ပုံဖြစ်ဖို့
ဒီအကြောင်းသွားပြောဖို့ကလည်း ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့် ကျွန်တော့်မှာမရှိဘူးလေ။
ကျွန်တော်ကတော့ ချောမွေ့လှပတဲ့ မျက်နှာလေးတစ်ခုပေါ်မှာ
အလုပ်ဆက်များချင်သေးတာပါ။ မေးရိုးတွေရဲ့ ထင်ရှားမှုကိုပေါ်လွင် အောင်၊
ညှို့ငှင်နေတဲ့ မျက်ဝန်းနက်တွေကိုတောက်ပအောင်၊ ခပ်ဖူးဖူး နှုတ်ခမ်းလွှာတွေ
ရွှန်းစိုအောင် အရောင်တွေကို အလွှာတစ်ခုအဖြစ် နုညံ့စွာ
ကျွန်တော်ပြုလုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ မျက်တောင်ရှည်တွေ တဖျတ်ဖျတ်ခတ်နေတဲ့
ဥက္ကာမျက်ဝန်းတွေကို brush လေးနှင့် ကစားမိ နေတာမှာ
မနာလိုစိတ်တွေတောင်ဝင်မိပါရဲ့။ ကျော်ကျော် အခန်းထဲပြန်ဝင်လာတာတောင်
ကျွန်တော်ဥက္ကာရဲ့ ရှေ့ မုဆိုးဒူးထောက်ပုံနှင့်ထိုင်ဖို့ဟန်ပြင်လိုက်တယ်။
ဖြစ်ပျက်နေကျ သဘာဝအတိုင်း ရှေ့ဆက်ဖို့လက်တွေက လှမ်း ပြီးမှ
ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် ထိန်းလိုက်ရပါတယ်။ တံတွေကိုး ဂလုကနဲမျိုချ၊ တစ်ခုခုကို
ဖျစ်ညှစ်ဆုပ်ကိုင်ထားဖို့ ကြိုးစားလိုက်ရတာပေါ့။ လည်ချောင်းကို
ရှင်းအောင်လုပ်၊ မိတ်ကပ်သေတ္တာကို ကောက်ကိုင်လိုက်ကာ ဟိုသည်ကြည့်သလို
Professional. ကျွန်တော်လုပ်ကိုင်နေတာ Pro တစ်ခု။
ကျွန်တော်နေ့စဉ်နှင့်အမျှ ဒီလိုအတွေ့အကြုံတွေနှင့် ဖြတ်သန်းခဲ့ရတာ ဘာ
ပြဿနာဘာအခက်အခဲမှ မရှိခဲ့စဖူး။ သဘာဝကျကျပြုံးနိုင်အောင် ကြိုးစားရင်း
အပြုံးတစ်ခုကို ကျွန်တော်ဖန်ဆင်းလိုက်တယ်။ 'ကျွန်တော် က ညီဇော်ပါ'
အိုး...ဥက္ကာကတကယ့်သဘာဝအစစ်အမှန်။ 'ဟုတ်ကဲ့' တဲ့ဝေ့၀ဲကျနေတဲ့ ဆံပင်တွေကို
သူ့ဘာသာ လက်တစ်ဖက်ဖြင့် ပင့် တင်ရင်းဖြေတယ်။
အမှန်ပါပဲ။ ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းတွေကသာပြုံးနေတာ မျက်ဝန်းတွေက
လှုပ်ရှားနေတဲ့ ဥက္ကာရဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းတိုင်းကို ကြည့်နေ မိပါတယ်။
၀တ်ထားတဲ့ T-shirt ကို သူခေါင်းပေါ်က မပြီးချွတ်လိုက်တဲ့ခဏ ပေါ်လာတဲ့
ခန္ဓာကိုယ်ပုံရိပ်တွေက ပြတ်ပြတ်သားသားနှင့် ပေါ် လွင် လှပပါရဲ့။
နို့သီးခေါင်းလေေးတွက ပန်းရောင်ပြေးနေသလို သူ့ abs တွေကလည်း
တောက်ပ၀ံ့ကြွားနေပါတယ်။ သူ့ရင်အုပ်အစုံမှ မွှေးညှင်းနုလေးတွေက
ဆီးစပ်အထိဆင်းသွားရော။ ခပ်လျော့လျော့လုပ်လိုက်တဲ့ ဂျင်းဘောင်းဘီကြောင့်
မြင်နေရတဲ့အမြှောင်းကြားလေး ကနေ ဆီးခုံမွှေးတွေကို မြင်ရတာများ
သူ့ငပဲနှင့် လက်မအနည်းငယ်သာကွာတော့ကြောင်း ရိပ်မိစေပါတယ်။ ကျွန်တော်
ဥက္ကာရဲ့ tattoo ရှိရာဆီကို တဖြည်းဖြည်း ထင်ထင်ရှားရှားမြင်ရပါပြီ။
တင်ပါးတစ်ဖက်ရဲ့ အောက်ဖက်နားခပ်ကျကျမှာထင်ရှားစွာပေါ့။ ကျွန်တော် ကိုယ့်
နှုတ်ခမ်းတွေကို မထိန်းနိုင်စွာ လျှာနှင့်သရပ်မိပါတယ်။ God, ကျွန်တော်
အို...ဘုရားသခင်။ ကျွန်တော် ကိုယ့်ဘ၀ကို ကိုယ်ကျေနပ်နှစ်သိမ့်မိတာ ခံစားရပါတယ်။
မိတ်ကပ်သေတ္တာကိုဖွင့်ပြီး သင့်တော်မည့် concealer
နှင့်ရေမြှုပ်တစ်ချို့ကို ခပ်ကြာကြာလေး ရှာနေမိပါရဲ့။ အသက်ပြင်းပြင်းရှူ
အနည်းငယ်တုန်ခါနေတဲ့ လက်တစ်ဖက်ကိုမြှောက် လိုက်ရင်း 'နည်းနည်းတော့
အေးမယ်ဗျ' ကိုယ့်ဖာသာကိုယ်ကြားရလောက်တဲ့ အသံနှင့်သူ့ကိုပြောလိုက်မိပါတယ်။
ဥက္ကာရဲ့ တင်သားပေါ် ကို concealer
စကားစမည်ပြောခွင့် ဖန်လိုက်ခြင်းပါ။ ဘယ်တော့မှ မရမဲ့အခွင့်အရေးကို
ရရှိခြင်းပါ။ ဒီစိတ်လှုပ်ရှားပုံမျိုးနှင့်ဆို တော်တော်ဆိုးတဲ့
အမူအရာတွေလုပ်မိနေတော့မယ်။ ကျွန်တော် အဲလိုအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးလေ
အထင်အမြင်သေးသွားနိုင်တယ်မဟုတ်လား။ ဥက္ကာနှင့် ဒီရက်လေးရဲ့ အဆုံးသတ်မှာ
ဘယ်လိုပြီးဆုံးသွားမယ် ဆိုတာ မသိပေမဲ့ အပေါင်းလက္ခဏာဆောင်တဲ့
ပုံရိပ်တွေတော့ ထင်ဟပ်သွားစေချင်ပါတယ်။ 'လေယာဉ်ခရီးစဉ်က အဆင်ပြေလားဗျ?'
ကျွန်တော် ညင်ညင်သာသာ မေးလိုက်ပါရဲ့။ လေးလေးမှန်မှန်နှင့်
ကျွန်တော် တံတွေးမျိုချမိပါတယ်။ ချိုချိုသာသာနှင့် ခပ်တိုးတိုးဆိုတတ်တဲ့
သူ့လေသံကိုပြန်နားထောင်ချင်မိပါ၏။ 'ဒီနေ့ နည်းနည်းအေး တယ်နော်..
သိပ်မချမ်းဘူးလို့ မျှော်လင့်ရတာပဲ' အဆင်ပြေတယ်ဗျ။ ဥက္ကာက 'ရာသီဥတုအေးတာ'
ကိုနှစ်ခုလောက်ထပ်ပြောပြီး သူ့ စကားလုံးကိုထင်ရှာစေတယ်။ ရာသီဥတုက
အေးတယ်ဆိုတာ ဥက္ကာသိတယ်။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ရာသီဥတုအေးမြတာကို အသားကျ
နေပါပြီ။ ဥက္ကာရဲ့ နို့သီးခေါင်းလေးတွေက မာပြီးတောင့်နေတာ ကျွန်တော့်မှာ
မကြည့်ဘဲ မနေနိုင်ခဲ့။ God, ကျွန်တော့်လျှာလေးနှင့် နွေး
ကျွန်တော်သက်ပြင်းအသာချမိပါတယ်။ ဟုတ်တယ် သူ့အနေနှင့်တော့
အသားကျနေလောက်ပါပြီ။ မော်ဒယ်လ်တွေက ရာသီဥတုအေး သော်လည်း အ၀တ်မပါတာ၊
တစ်ဝက်တစ်ပျက် အ၀တ်ဝတ်ပြီး အလုပ်လုပ်ရတာတွေကို ကျင့်သားရနေကြပြီထင်ပါတယ်။
အရူး... သောက်ရူးပဲ...ကိုယ့်ဖာသာ ပြောမိပါရဲ့။ ဥက္ကာအသားအရေက
ချောမွတ်ပြီးသားဆိုတော့ tattoo ကို မိတ်ကပ်သားနှင့် ဖုံးကွယ်ထားတဲ့
အသားအရေဟာ တသားတည်းဖြစ်သွားရမှ။ နည်းနည်းလေးထပ်ပြီး အချောသပ်လိုက်ပါတယ်။
'အစ်ကို့ tattoo ကို ကျွန်တော် တော့ သဘောကျတယ်ဗျ' စကားမပြောဘဲ
အလုပ်လုပ်ဖို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတိပေးထားတဲ့ကြားက စကားပြောမိတယ်။
ဥက္ကာက မိတ်ကပ်လိမ်းခံနေရတာကို ပျင်းလာပြီထင်ရဲ့။ ကျွန်တော်ခပ်မြန်မြန်
လှုပ်ရှားရမယ်ဆိုတာ သိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့်လက် တွေက နှေးတုံ့နေရော။
ဥက္ကာရဲ့ အရေပြားတွေက ချောမွေ့ကြည်လင်လွန်းပါတယ်။ သူ့ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားက
so hot.... ကျွန်တော့် မျက်နှာက ဥက္ကာရဲ့ ငပဲနှင့်အလွန့်ကိုနီးကပ်နေတာ၊
ဘောင်းဘီအဟကြားကမြင်နေရတဲ့ အမွှေးနုလေးတွေဟာ အား....ကျွန်တော့်စိတ် တွေ
သောင်း ကျန်းလာပါပြီ။ ကျွန်တော့်စိတ်ကူးထဲမှာ သူ့ဘောင်းဘီကိုဆွဲချွတ်ပေး
ဥက္ကာလည်း ကျွန်တော့်ဦးခေါင်းကိုဆွဲကိုင်ကာ သူ့ လိုအင်ဆန္ဒဆီ
ကျွန်တော် သူ့ဆီးခုံက အမွှေးနုလေးတွေကို ပွတ်သပ်ချင်ပါတယ်။
ဒီလောက်ဆွဲဆောင်မှုပြင်းထန်တဲ့ ဥက္ကာရဲ့ငပဲကို လျှာဖျားလေးနှင့်
ကျောက်သားအလားမာတောင့်နေမိပြီ။ တစ်ပြိုင်နက်တည်းမှာ အလုပ်လုပ်နေ တာ....
Professional ဆန်နိုင်သမျှ ဆန်အောင်ကြိုးစားပါတယ်။ လက်ချောင်းလေးတွေနှင့်
အလုပ်များနေတဲ့ ကျွန်တော့်အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းအလုပ်မှာပဲ
အာရုံဝင်စားရတာပါ။ ဒီထက်မပိုရဘူး။ အလုပ်ပြုတ်ဖို့
မကြောက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်စွန့်စားကြည့်လို့ရနိုင် တာပေါ့နော်။
ကျွန်တော် အလုပ်များနေတာကို ဥက္ကာစောင်းငဲ့ကြည့်ပါတယ်။ ကျွန်တော်
ဆံနွယ်ခွေကောက်လေးတွေကို သဘောကျဟန်တူပါရဲ့။ ပြီးတော့ ပြုံးလိုက်တိုင်း
ကျွန်တော့်ပါးပြင်ကပေါ်လာတတ်တဲ့ ပါးချိုင့်တွေကို သူငေးတယ်။
နည်းနည်းပိန်သွယ်တဲ့ ကျွန်တော့်ကိုယ်ဟန် ကိုကြည့်ရင်း
နည်းနည်းခပ်ရွံ့ရွံ့ဖြင့် 'သိပ်မကြာတော့ပါဘူး အသားအရောင်နှင့် တစ်
သားတည်းဖြစ်အောင်လုပ်နေလို့ပါ။ အစ်ကို့အသားအရေက သိပ်ကောင်းတာပဲနော်'
'ဘယ်လိုခံစားရမလဲ စမ်းကြည့်ချင်လား?' အဲလိုအဓိပ္ပာယ်မျိုးစကားလုံးတွေကို
ဥက္ကာရဲ့နှုတ်ခမ်းတွေကပြောနေသလိုပဲဗျ။ ဒါပေမဲ့ သူ့ ကိုယ်သူ
ထိန်းချုပ်ဟန်ဖြင့် 'ကျေးဇူးပဲဗျ' တဲ့ပြောပြန်တယ်။ ဘာကြောင့်ဆို
သူလည်းလူတွေ အလုပ်အပေါ်အမြင်တစ်မျိုးကြည့်ကြမယ်၊ တော်တော်များများက
ကျွန်တော့်လက်တွေက တုန်ခါနေတာမျိုးလည်းမဟုတ်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုမျိုးနှင့်
ကျွန်တော့်ဆန္ဒကို ပြသနေကြပါတယ်။ ကျွန်တော်သူ့ကို လိုအပ်နေခဲ့ပြီ။
ဥက္ကာကပြုံးပါရဲ့။ ပြီးတော့ သူ့ဘောင်းဘီကြယ်သီးကို အဆုံးသတ်ဖြုတ်ကာ
တင်ပါးအကွဲကြောင်းအဆုံးသတ်ပေါ်ကာနီးထိ လျောချ ပေးတယ်လေ။
ကျွန်တော့်လက်လေးတွေနှင့် အသာတို့ကိုင်မိစဉ်ခဏ တစ်ကိုယ်လုံး
အေးခဲသွားသလိုမျိုး၊ ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းတွေဟာ ပြူးကျယ်၊ နှုတ်ခမ်းသားတွေဟာ
တင်တင်းစေ့။ အိုး....Yeahh! ကျွန်တော်သူ့ကိုတွယ်ငြိနေပြီ။ သူ
လက်တစ်ဖက်ကို နံရံမှာထောက်ထား ပြီး နောက်လက်တစ်ဖက်က ပုံကျလုနီး
ဂျင်းဘောင်းဘီကို ထိန်းကိုင်ပေးထားတဲ့ဟန်က မြင်ရသူက
တစ်ယောက်ယောက်က ဘာလုပ်နေတာလဲမေးခွန်းထုတ်မယ်ဆိုရင် ဥက္ကာက ပြန်ဖြေလိမ့်မယ်
ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ရတာ အဆင်ပြေ အောင် နေပေးနေတာလို့။ သူ
ဘယ်လောက်ထိန်းနိုင် မထိန်းနိုင်ဆို တာမျိုးကိုလေ။ အ၀တ်မဲ့လုနီးပါး
ဥက္ကာရဲ့ ကိုယ်လုံးကို မျက်လုံးတွေကျွတ်တော့မတတ်ကြည့်မိနေတဲ့
ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းတွေက အဖြေ ပေးစရာမလိုပါဘူးလေ။
God, ကျွန်တော်...ကျွန်တော်ဘာများ ဖြစ်သွားပြီလဲ? ဥက္ကာရဲ့
ရှေ့ဘက်ကိုရောက်သွားပြီ။ ခုံးထနေတဲ့ ဥက္ကာရဲ့ငပဲဟာ အ၀တ်မဲ့လုနီးပါး
ဖြစ်နေတဲ့ ပေါင်ခြံက အမွှေးနုတွေကြားမှာ နည်းနည်းမြင်နေရသလားပဲ။
အရာရာအားလုံးဟာ ခြားနားခဲ့ရင်၊ သူသာပြဿနာရှာတတ်သူ မဟတ်ုခဲ့ရင် ကျွန်တော်
သူ့ရဲ့အရေပြားအနှံ့ကို လျှာဖျားလေးနှင့်လျက်၊ ပြီးတော့
လျင်လျင်မြန်မြန်ကျွန်တော့်ပါးစပ်ကို ဥက္ကာရဲ့ tattoo ပေါ် ရောက်ရှိကာ
လိမ်းထားတဲ့မိတ်ကပ်တွေပြောင်သလင်းခါကာ နဂိုအသားအရေပေါ်တဲ့အထိ လျာနှင့်
သန့်ရှင်းပေးမိမှာပါ။ သူ့ရဲ့ တင်ပါးဆုံကို ကိုင်ပြီးအားပြုထားတာဆိုတော့
ငွားငွားစွင့်စွင့် အသားဆိုင်ဟာ ကျွန်တော့်လက်ထဲမှာ အားရပါးရ ဖြစ်မှာပဲ။
ဂျင်းဘောင်းဘီက သူ့ခါးမှာဝတ်ထားတယ်ဆိုရုံ တည်းတည်းလေးချိတ်နေခြင်းကြောင့်
သူသာအောက်ကိုနည်းနည်းပိုလျောချလိုက်ရင် ဥက္ကာရဲ့ ငပဲကိုသတိထားကြည့်မိရမှာ။
ကျွန်တော့်စိတ်ကူးထဲမှာတော့ ဥက္ကာရဲ့ငပဲကို ကိုင်ထားနေပြီ၊
နုနုညံ့ညံ့လေးအထက်အောက် ပွတ်သပ်နေပြီ၊ သူ့မျက်ဝန်းထဲမှာ ဆာလောင်မှုတွေ
မွတ်သိပ်စွာမပေါ်ခင်ငပဲက ကျွန်တော့်လက်ထဲရှင်သန်ထကြွလာပြီတဲ့။ လက်ဝါးနှင့်
အပြည့်ဆုပ်ကိုင်ထားတဲ့ ငပဲကိုဖြည်းဖြည်းမှန်မှန် လှုပ်ရှားပေးနေတာ
အားရစဖွယ်တုတ်ပြီးထွားလာတာ။ ကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲ သွားရည်
ထွားလာတဲ့ ငပဲတစ်ခုလုံး အနှံ့လက်နှင့်ပွတ်သပ်ပေါ့။ ကျွန်တော် ပိုပိုပြီး
ဆာလောင်လာသလို ငပဲကိုအားရပါးရပိုမိုစုပ်မျိုမယ်၊ လတ်ဆတ်ပြီး အနံ့မရှိ
ဒီအခန်းထဲကထွက်သွားစေချင်တဲ့ပုံပဲ။ ဖြစ်နိုင်ခြေတွေနှင့် ပြည့်နေတဲ့
သူ့စိတ်တွေ အပြင် သူ့ငပဲကနည်းနည်းမာလာတာကြောင့်ဖြစ်မှာ။ ကျော်ကျော်သာ
အခုပဲလက်နဲ့ထိုးဆွတော့မယ့်အတိုင်း။ ပြီးတော့ ဦးခေါင်းကိုထိန်းကိုင်ကာ
အရောင်တောက်တောက်တွေက သူ့တင်ပါးဆုံကို ကိုင်ထားတာဖြစ်ပေမဲ့
ရှေ့ခွဆုံကိုပိုမိုကိုင်တွယ်ပွတ်သပ်စေချင်တာ။ ပြီးတော့ သူ့
ဗိုက်သားတွေကိုအနမ်းပေး၊ သူ့ abs တွေကိုလျှာနှင့်ပွတ်သပ်စေချင်တာ။
ပြီးတော့ သူ့ဗိုက်သားတွေကိုအနမ်းပေး၊ သူ့တွေကိုလျှာနှင့် လျက်
ချက်ကလေးကိုလျှာနှင့်ကလိပေးမည့် ကျွန်တော့်ကို အသေဆာလောင်ဟန်ပေါက်နေတယ်။
ဂျင်းဘောင်းဘီကို ကျွန်တော့်လက် အစုံနှင့် ဂရုတစိုက်ဖြည်းဖြည်းဆွဲချ၊
မတ်ထောင်နေတဲ့ သူ့ငပဲကို နုညံ့တဲ့ ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းသားတွေနှင့်
ညှပ်ယူပွတ်သပ်မယ်။ ကောင်း ကောင်းလေးနှင့် ဖြည်းဖြည်းစပြီး စုပ်မျို၊
ပြီးတော့ သူ့တင်ပါးတွေ ကျစ်ကျစ်သွားတာကို လက်နှင့်ကိုင်ပြီး
ခံစားကြည့်ရင် သူကလည်း ကျွန်တော့်ဦးခေါင်းကို သူ့လက်နှင့်ထိန်းကိုင်ပြီး
မွတ်သိပ်ပြင်းပျစွာ နှုတ်ခမ်းသားတွေကို ဖြတ်သန်းကာ အာခံတွင်းထဲ
စိတ်ကူးထဲမှာတော့ ကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲ ဥက္ကာရဲ့ ကြီးမားထွားကြိုင်းတဲ့
ငပဲကပြည့်နေပြီ။ ကွမ်းသီးခေါင်းဟာ ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းသားတွေ ကို
ဖြတ်သန်းပြီး လည်မျိုထဲ လျောကနဲလျောကနဲ ၀င်ဝင်သွားတာ။ ဥက္ကာရဲ့ နှုတ်ဖျားက
ညည်းညူသံတွေဟာ ကျွန်တော့်စိတ်ကို ပိုမို
သောင်းကျန်းအောင်ပြုလုပ်နေသလိုပဲ။ ဥက္ကာရဲ့ ငပဲဟာ မာတောင့်သထက်မာလာတာ
ကျောက်သားအတိုင်းဗျ။ ခဏလေးတော့ ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းတွေ
အရည်လဲ့နေတဲ့ သူ့မျက်ဝန်းတွေရဲ့ မွတ်သိပ်မှုဟာ ကျွန်တော့်အာခံတွင်းထဲ
ရေဓာတ်ကို လိုအပ် လာစေသလိုပါပဲ။
ကျွန်တော်ခြေဖ၀ါးကို ကြမ်းပြင်ပေါ်အားပြုရပ်လိုက်တော့ ဥက္ကာက
အခန်းနံရံနှင့် ကျွန်တော့်ကျောပြင်ဖိကပ်အောင် တွန်းပို့ရင်းအနမ်း တွေကို
ခပ်ပြင်းပြင်းမွှေပါတော့တယ်။ ပြင်းပျပြီး မိန့်မူးဖွယ်အနမ်းတွေပါ။
ကျွန်တော်သည်လည်း သူ့နှုတ်ခမ်းသားတွေကို ကိုက်စားတော့ မတတ်
သူ့ကိုယ်မှာ မရှိတော့သလို ကျွန်တော့်ကိုယ်ပိုင်အ၀တ်တွေဟာလည်း အဝေးမှာ။
အခုတော့ အ၀တ်မပါခန္ဓာကိုယ်နှစ်ခုအရေပြားခြင်းထိ ကပ်နေပါပြီ။
နှစ်ယောက်သားရဲ့တပ်မက်မှုတွေဟာ မီးထတောက်တော့မတတ်ဖြစ်နေကြတာများ အပြင်က
ရာသီဥတုအေးတာကို ဂရု မပြုမိအောင်ပါပဲလေ။
ကြွက်သားအမြှောင်းတွေ၊ အရိုးဆက်တွေ၊ ပိုးသားလို နုညံ့တဲ့
သူ့အရေပြားတွေကောပေါ့။ မျဉ်းကွေးတစ်ကြောင်းလိုဝေ့၀ိုက်နေတဲ့ ဥက္ကာရဲ့
တင်သားဆိုင်တွေဟာလည်းပဲ ကျွန်တော့်လက်အစုံထဲမှာ ကောင်းကောင်းရောက်နေတာပါ။
ကျွန်တော်သူ့ဆံနွယ်တွေကို ပွတ်သပ်မိချိန်မှာတော့ ဥက္ကာရဲ့နှုတ်ခမ်းဟာ
ကျွန်တော့်နှုတ်ဖျားမှခွာကွာ နည်းနည်းညည်းညူပါရဲ့။ သူ့လက်တစ်ဖက်
ကျွန်တော့်ပေါင်ခြံ၊ ရွှေဥတွေအပြင် တင်ပါးအကွဲကြားက ခရေ၀ထဲ
သူ့လက်ညှိုးလေးတွေ နှင့် နှိုက်သေးတာပါ။ ကျွန်တော့်မှာ
ပေါင်နှစ်ချောင်းကိုကား နှုတ်ဖျားကညည်းညူရင်း သူလုပ်နေတာကို
ငြင်းဆန်ခြင်းမပြု လက်ခံမိပါ တယ်။
ဥက္ကာရဲ့ မျက်လုံးတွေဟာ မှေးမှိတ်နေပြီ။ သူ ဘာဖီလင်တွေယူနေပြီလဲ။
ကျွန်တော့်ရဲ့ အ၀တ်မဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကို နံရံအားမျက်နှာမူ သူ့ရှိရာ ဘက်ကို
ကျောပြုရင်း ရပ်ပေးထားတော့ ငွါးငွါးစွင့်နေတဲ့ ကျွန်တော့်တင်ပါးတွေကို
လက်တွေနှင့်ပွတ်သပ်နေပြီပေါ့။ ကျွန်တော့်တင်သား ဆိုင်တွေကို
လက်ချောင်းလေးတွေနှင့် ဖျစ်ညှစ်ရင်း ကျွန်တော့်လည်တိုင်ကို
သူအနမ်းပေးတယ်ဗျ။ ခပ်တိုးတိုးနှုတ်ဖျားက ပြောမယ်ထင်ရဲ့ 'ငါ
မင်းကိုသောက်ရမ်းချချင်နေပြီ' လို့။ ကျွန်တော်ကတော့ ဘာမှပြောနိုင်မယ်မထင်
တုန်ရီနေတဲ့ ညည်းညူသံတွေနှင့် ငံ့လင့်နေမိမှာ။
သောက်ရမ်းမာနေတဲ့ သူ့ဒစ်ကို ကျွန်တော်
တဖြည်းဖြည်းဝင်လာတဲ့ ငပဲကြောင့် ခံစားချက်က ပိုမိုထိမိလာပါတယ်။ သူ့
ရဲမာန်ဖီသံတွေ ထွက်လာသလို သူ့သွားတွေက
မိန့်မူးသံရော သူ့ အသံကြောင့်ရော နှစ်ဦးသားရဲ့စိတ်ဆန္ဒကို
ပိုပိုဆာလောင်မွတ်သိပ်စေပါရဲ့။ အထုတ်အသွင်း စည်းချက်မှန်မှန်၊
တင်ပါးနှင့် သူ့ဆီးစပ် တဖတ်ဖတ်ရိုက်ခတ်သံ၊ ကျွန်တော့်ရဲ့ လိုချင်မှု၊
ကျွန်တော် ညည်းညူအော်ဟစ်မိတယ်၊ သူ့အမည်ကိုတပြီး ဒီထက်ခပ်မြန်မြန်
လှုပ်ရှားပေးဖို့တောင်းဆိုမိပါရဲ့နော်။ ဥက္ကာရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်
လှုပ်ရှားမှုတွေသွက်လာချိန်မှာ ကျွန်တော် ကိုယ့်ငပဲကို
ကိုယ့်ဖာသာဆုပ်ကိုင်ကာ ကစားမိပါပြီ။ ခပ်ကျစ်ကျစ်ငပဲကို ဆုပ်ကိုင်ကာ
ဥက္ကာရဲ့ ဆောင့်သွင်းချက်နှင့်အပြိုင်ကစားတာပါ။ ဥက္ကာတစ်ယောက် သူ့ငပဲကို
ခပ်ပြင်းပြင်းပိုမိုမြန်ဆန်စွာ အထုတ်အသွင်းလုပ်တာများ အခုပဲ
အပြေးပြိုင်ပွဲမှာ ပန်းတိုင်ကို ၀င်ရောက်တော့မယ့်အတိုင်း။
ကျွန်တော်....ကျွန်တော် အရင်ဆုံးပြိုင်ပွဲကို ပန်းဝင်တယ် နံရံတွေကို
စိုရွှဲသွားတဲ့အထိ သုတ်ရည်တွေကိုလေ။ ကျွန်တော့်ရဲ့ တုန်ခါနေဆဲ ခန္ဓာကိုယ်ဟာ
တစ်ချက်တစ်ချက် တိုးဝင်သွားတဲ့ ကျွန်တော့်ညည်းညူသံနှင့်အတူ ဥက္ကာရင်ခွင်ထဲ
ဥက္ကာကတော့ ကျွန်တော့်တင်ပါးအစုံကို ဆုပ်ကိုင်ရင်း အဆုံးစွန်ထိ
ဥက္ကာသည်လည်း သူ့ရွှေဥထဲက သုတ်ရည်တွေကုန်သွားမလားဆိုတဲ့အထိ ပစ်သွင်းပါတယ်။
သူ့မျက်နှာက ကျွန်တော့်လည်တိုင်မှာ ပွတ် သပ်နမ်းရှိုက်ရင်း
ကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ်ကို သူ့ရင်ခွင်ထဲဆွဲသွင်းထားတာ ဘယ်သူက ဘယ်သူ့ကို
နှစ်ဦးသား ကိစ္စပြီးသွားပေမဲ့ ကျွန်တော် ဥက္ကာရဲ့
လက်မောင်းတွေထဲကမထွက်သေးဘဲ ဥက္ကာရဲ့ ပြည့်စုံလှတဲ့
မျက်နှာကိုငေးစိုက်ကြည့်မိ နေပါတယ်။ ဥက္ကာက ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းအစုံကို
ငုံ့ပြီးနမ်းရင်း တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပွေ့ဖက်တော့ သူ့ဆံနွယ်တွေကို
လက်ချောင်းတွေနှင့် ထိုးဖွမိပြီပေါ့။ ဥက္ကာက
'ညီဇော်' စူးစူးရှရှ ကျော်ကျော်ရဲ့ ခေါ်သံကိုကြားရမှ ကျွန်တော့်မှာ
စိတ်ကူးယဉ်ကမ္ဘာကလွန်မြောက်ပါတယ်။ အလန့်တကြား အစစ် အမှန်ဘ၀ကို
သတိပြန်လည်တယ်ဆိုပါတော့။ ကျွန်တော် မျက်တောင်တွေကို တဖျတ်ဖျတ်ခတ်
ဘာတွေအမှားလုပ်မိခဲ့သေးလဲ အ၀တ် မဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေဖြစ်နေလား
လေ့လာကြည့်မိပါရဲ့။ Jesus, ၀ိုး...ကျွန်တော့်လက်တစ်ဖက်ကို ဥက္ကာက
အသာကိုင်ရင်း ဖျစ်ညှစ်တယ်။ ဥက္ကာရဲ့မျက်ဝန်းတွေကို
လို့ပြောလိုက်ပါရော။ ကျွန်တော့်အသံက နည်း နည်းတိုးညှင်းပေမဲ့
ဥက္ကာ မျက်ဝန်းတွေရဲ့ စိုက်ကြည့်မှု ခံစားချက်ကို
ကျွန်တော်မဖတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဖြည်းညှင်းစွာ လက်တစ်ဖက်ကို ဥက္ကာဆန့်ထုတ်ပေး
တယ်။ ကျွန်တော်လည်း လက်ကမ်းလိုက်ပြီး
ဥက္ကာလက်ကိုလှုပ်ရမ်းနှုတ်ဆက်လိုက်တာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ဥက္ကာကကျွန်တော့်လက်ကို
မလွှတ် ဘဲ မသိမသာကိုင်ထားတာကြောင့် ကျွန်တော်ကသာပြန်ဆွဲလိုက်ရင်း
ခြေထောက်တွေကိုတစ်ဖက်သို့လှမ်းဟန်ပြုလိုက်တယ် ကျွန်တော့် ငပဲမာနေတာကို
တစ်ယောက်မှမမြင်ပါစေနဲ့ ဆုတောင်းရင်းပေါ့။ ကျွန်တော့်အရပ်က
ဥက္ကာလောက်မမြင့်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး
နီးကပ်နေတာကြောင့် နည်းနည်းမူးဝေသလို ခံစားရပါတယ်။ပြီးတော့ ဥက္ကာက
ကျွန်တော် လက် ဆွဲနှုတ်ခြင်းကို ခွင့်မပြု သေးဘူးလေ။ ကျွန်တော်
ဥက္ကာရဲ့မျက်ဝန်းတွေကို လှန်ကြည့်လိုက်တော့ ဘာကြောင့်များ
ဥက္ကာရဲ့မျက်ဝန်းတွေနဲ့တူနေရတာပါလိမ့်။ 'ကျေးဇူးပဲဗျ' ဥက္ကာကပြောပါတယ်။
သူ့အသံက နုညံ့ချိုမြိန်ပေစွ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်
တစ်ယောက်ထဲကြားရလောက်အောင် တိုးညှင်းပါတယ်။ ပြီးတော့
God, ကျွန်တော် သူ့ကိုလိုချင်ပိုင်ဆိုင်ချင်လိုက်တာ။ 'ဟုတ်ကဲ့...
ကျွန်တော်လည်း ဥက္ကာအဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်' ကျွန်တော် လည်း
ဥက္ကာက ကျွန်တော့်လက်ကို လွှတ်ပေးလိုက်တဲ့ခဏ ကျွန်တော်သိနေမိတာက ဥက္ကာ..သူ
ထွက်ခွာတော့မယ် ပြီးတော့ ဒီလို နီးနီးကပ်ကပ် တွေ့ချင်မှတွေ့ရတော့မှာ။
ဒါပေမဲ့လည်း ဥက္ကာရဲ့ ပန်းသွေးရောင်လက်တစ်ဖက်ဟာ
ကျွန်တော့်မေးစေ့ကိုစူးစမ်းသလို လှမ်းကိုင်လိုက် တော့ ကျွန်တော့်မှာ
နေရာမှာတင်အေးခဲသွားသလို ငြိမ်သက်ပေးမိပါတယ်။ ဘာတွေဖြစ်နေလဲ မသေချာသလို
ရပ်တန့်ဖို့လည်း မ တောင်းပန်မိ။
'မိတ်ကပ်တွေ မညီတော့ရင် ခင်ဗျားပြန်လာပြီး ပြန်လိမ်းပေးနိုင်မလား' ဥက္ကာ က
အသံတိုးတိုးနဲ့ပြောတာ။ သူ့ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့နွေးထွေးမှုကို ခံစားရမိနေတဲ့အထိ
ကျွန်တော့် အဆုတ်တွေထဲ လေမရှိတော့သလိုပါ။ ကမန်းကတန်းလေကို ၀၀ရှူသွင်းရင်း
'အိုကေ...အိုကေ ရတာပေါ့' လို့ပြောရတယ်။ 'ကောင်းတာပေါ့' တဲ့ သူက
ခပ်တိုးတိုးဆိုရဲ့။ ပြီးတော့ နွေးထွေးပြီး သီးသန့်ဆန်တဲ့အပြုံးကို
ကျွန်တော့်ကိုပေးတယ်။ လက်အစုံကို အသာချ ကျွန်တော့်ကိုကျောပေးပြီး
အလုပ်ခွင်ရှိရာကို ထွက်သွားရဲ့...တည်ငြိမ်၊ ကျပြီး
ယုံကြည်ချက်အပြည့်ပါသော ခြေလှမ်းများဖြင့် ပေါ့နော်..။
ကျော်ကျော်ပြောနေတဲ့စကားတွေကို တုန့်ပြန်ပြောဆိုခြင်းမပြုမိ အခန်းပြတင်း
ကနေ ကမ်းခြေကိုလှမ်းမျှော်ကြည့်ရင်း ပြုံးလိုက်မိပါတယ်....ရာသီဥတုက
Posted by Alex Aung at 7:09 PM No comments:
Wed, Dec 7, 2011 at 9:43 AM
Q: ကျွန်တော်က ၁၉ နှစ်အရွယ် ကျောင်းသားတစ်ဦးပါ။ ကျွန်တော့်မှာ
အရမ်းစိုးရိမ်နေတတ်တဲ့ ရောဂါရှိပါတယ်။ ဒီရောဂါ ကြောင့်လား မသိဘူး
ညအိပ်လို့ရှိရင် ညတိုင်းလိုလို သုက်ထွက်နေပါတယ်။ အရမ်းကို စ်ိတ်ဆင်းရဲ
နေရပါတယ်။ ဒီလို သုက်ထွက်တိုင်း ကျွန်တော် အရမ်းစိတ်ဓာတ်ကျပါတယ်။
ဒါကြောင့် စိတ်ညစ်တာကို မထိန်းနိုင်ဘူး ဖြစ်နေတယ်။ ဒီလိုနဲ့ပါ
A: Zavesca ဆေးက စိတ်မကျဆေး မဟုတ်ပါ။ ဘယ်ဆရာဝန်ကနေ ဘာအတွက် ညွှန်တာပါလဲ။
ဒီဆေးက Type 1 Gaucher disease ဆိုတဲ့ မျိုးရိုးပါ ရောဂါတမျိုးအတွက်
သုံးရတယ်။ (အင်ဇိုင်းမ်) တမျိုး နည်းနေသူတွေကို ပေးပါတယ်။ ဒီရောဂါ
ရှိနေသူဟာ ဆေးမကုဘဲနေရင် သွေးအားနည်းစေတတ်တယ်။ ဒီရောဂါအပြင် Zavesca
ဆေးကို ရှာပါးတဲ့ အာရုံကြောရောဂါ အတွက်လဲ ပေးသေးတယ်။ Zavesca ဆေးရဲ့
ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေက ထုံ-ကျင်တာ၊ လက်တုံတာတွေ ဖြစ်နိုင်တယ်။
သာမန်ဆိုးကျိုးတွေက ဝမ်းပျက်တာ၊ ဝမ်းချုပ်တာ၊ ခေါင်းနဲနဲမူးတာ၊
ခေါင်းကိုက်တာ၊ အစားပျက်တာ၊ လူပိန်လာတာတွေ ဖြစ်နိုင်တယ်။
စိတ်ဓါတ်ကျနေတာကို ပြင်ရပါမယ်။ ပြင်လို့လဲရပါတယ်။ လိုအပ်ရင် ဆရာဝန်၊
စိတ်အထူးကုကို ပြပါ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ စိတ်-အထူးကုဆရာဝန်ဆီ သွားရတာ
ရှက်စရာလို့ ထင်နေကြတုံးဘဲ။ မမှန်ပါ။ နဲနဲလေးဖြစ်တာနဲ့ စိတ်-အထူးကု
ယောက်ျားလေးတွေ ငယ်တုံးအရွယ် အိမ်ထောင်လဲ မကျသေးချိန်မှာ
အလိုလိုသုက်ထွက်တာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ လူတိုင်း လိုလိုလို့တောင် ပြောနိုင်တယ်။
အိပ်နေတုံး ထွက်မယ်။ တခါတလေ သုက်က နည်းချင်နည်းမယ်။ အများအားဖြင့်
လိင်ကိစ္စ ပြီးစီးသွားသလိုမျိုး များတယ်။ လူငယ်တွေသာ မဟုတ်ပါ။
အိမ်ထောင်ရှိသူ၊ လိင်ဆက်ဆံမှု ပုံမှန်ရှိသူတွေ မဆက်ဆံတာ ကြာသွားရင်လဲ
အိပ်နေတုံးမှာ သုက်ထွက်တာ ဖြစ်တာပါဘဲ။ (မာစတာဘေးရှင်း) လုပ်နေကျလူဟာ
မလုပ်တာကြာသွားရင်လဲ ဖြစ်မယ်။ ရောဂါမဟုတ်ပါ။ ဆေးကုစရာ မလိုပါ။
အိပ်နေရင်း သုက်ထွက်တာကို Nocturnal emission လို့ခေါ်တယ်။ ယောက်ျားတွေမှာ
သုက်ထွက်ပြီး၊ မိန်ကလေးတွေလဲ အိပ်ပျော်နေရင်း (ဗဂျိုင်းနား)
စိုစွပ်လာတာကိုပါ ခေါ်တယ်။ Wet dream လို့ လွယ်လွယ် ခေါ်သေးတယ်။ အမှန်က
Spontaneous orgasm အလိုအလျှောက် လိင်ကိစ္စပြီးသွားတာ ဖြစ်တယ်။
ငယ်သူတွေမှာ ပိုအဖြစ်များပေမဲ့ အရွယ်မရွေး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဘယ်လောက် အဖြစ်များသလဲ အတိအကျ ပြောမရပါ။ လေ့လာမှုတွေက အဖြေမတူတာတွေ
ထွက်တယ်။ အမေရိကားမှာ -
• ၈၃% ယောက်ျားတွေဟာ အိပ်နေတုံးမှာ သုက်ထွက်တာ ဖြစ်ဘူးကြတယ်။
• ၁၅ နှစ်သား ယောက်ျားလေးတွေမှာ ၇ ရက်တပါတ်မှာ ဝ့၃၆ ကြိမ်နှုန်းဖြစ်တယ်၊
• အသက် ၄ဝ ရှိသူ အိမ်ထောင် မရှိသူတွေမှာ ဝ့၁၈ ကြိမ်နှုန်းဖြစ်တယ်။
• ၁၉ နှစ်သား မိန်းမရှိသူတွေမှာ တပါတ်မှာ ဝ့၂၃ ကြိမ် နဲ့
• အသက် ၅ဝ အိမ်ထောင်သည်တွေမှာ ဝ့၁၅ ကြိမ် ဖြစ်ကြတယ်။
• တချို့နိုင်ငံတွေမှာ ပိုနိုင်တယ်။ ဥပမာ အင်ဒိုနီးရှားမယ် ၂၄
နှစ်ရောက်သူတွေထဲက ၉၇% မှာ အဲလိုဖြစ်ကြတယ်။
နာမည်ကြီး လိင်-ဆေးပညာရှင် Alfred Kinsey က Masturbation (မာစတာဘေးရှင်း)
နဲ့ Nocturnal dreams အိပ်ရင်း အိပ်မက်ဟာ အကြိမ်ရေ ဆက်စပ်မှု ရှိတယ်လို့
ဆိုပါတယ်။ (မာစတာဘေးရှင်း) လုပ်တာ နည်းရင် ညသုက်ထွက်တာ များမယ်။
Testosterone-based drugs ယောက်ျား-ဟော်မုန်းဆေး သောက်ရင်
အကြိမ်ပိုများနိုင်တယ်။ ၁၉၉၈ သုတေသနတခုအရ ဒီဆေး မသောက်သူတွေမှာ ၁၇%
သာရှိပေမဲ့ ဟော်မုန်းဆေး များများ သောက်သူတွေမှာ ၉ဝ% အထိရှိတယ်။
လူပျိုပေါက် အရွယ်မှာ ယောက်ျားလေး ၁၃% က ပဌမဆုံး-သုက်လွှတ်တာကို
Nocturnal emissions အိပ်ရင်း သုက်ထွက်ခြင်းလို့ သတ်မှတ်ရာကနေ Nocturnal
sex dreams အပြာ-အိပ်မက်လို့ ခေါ်လာတယ်။ Nocturnal orgasm အိပ်ရင်း ပြီးတာ
လို့ဆိုရင် ပိုမှန်မယ်။ ဒါလဲ အကုန် မမှန်သေးဘူး။ ခဏတဖြုတ် နေ့ခင်း
အိပ်နေရင်းလဲ ဖြစ်တတ်တာဘဲ။ Diurnal sex dreams နေ့အိပ်မက်လို့
ခေါ်ပြန်တယ်။ Orgasm during sleep အိပ်ရင်း-ပြီးတာလို့ ခြုံခေါ်တာက
• ခရစ်ယန်မှာ Saint Augustine က အိပ်နေတုံး သုက်လွှတ်တာဟာ Sin အပြစ်
မဟုတ်ဘူးလို့ ယူဆတယ်။ (မာစတာဘေးရှင်း) လုပ်သလို လူတယောက်ရဲ့ ဝိဥာဉ်ကို
• Jewish ဂျူးအယူအဆကတော့ Mosaic Law of the Bible မှာ ယောက်ျားတယောက်ဟာ
အိပ်နေတုံး သုက်လွှတ်တယ် ဆိုရင် တကိုယ်လုံးကို ရေနဲ့ မနက်ကနေ ညနေအထိ
ဆေး-ချိုး သန့်ရှင်းပြစ်ရမယ်။ သုက်ပေတဲ့ အဝတ်အစားကိုလဲ အဲလိုလုပ်ရမယ်။
တချို့နေရာတွေမှာ (ကင့်ပ်) ထဲမဝင်ရတာ၊ မြင့်မြတ်တဲ့အစာ မစားရတာမျိုး အထိ
• ရှေးဟောင်း မွတ်ဆလင်တွေကလဲ ဘာသာရေးလုပ်ရင် သုက်ကို ဘယ်နည်းနဲ့ ထွက်ထွက်
မသန့်ရှင်းဘူးလို့ ယူဆတယ်။ ရေချိုး သန့်စင်စေတယ်။ ဒါပေမဲ့ ညအချိန်မှာ
သုက်အလိုလို သုက်ထွက်တာကို အကုသိုလ်လို့ မသတ်မှတ်ဘူး။
• ဘာသာရေးတွေကနေ ယောက်ျားတွေကိုသာ အဲလို တားမြစ်မှု လုပ်ထားခဲ့ကြတာဟာ
မိန်းမတွေမှာ (အီဂျက်ကူလေးရှင်း) မဖြစ်ဘူးလို့ ယူဆလို့ ဖြစ်မယ်။
လိင်-ဆေးပညာ ထွန်းကာလာမှ ဖြစ်တာနည်းပေမဲ့ အမျိုးသမီးတွေလဲ ပြီးရင် Female
Ejaculation ပန်းထွက်တာမျိုး ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ သိလာကြတယ်။
Noctural emission ကို Spontaneous orgasm သူ့အလိုလို
လိင်ဆန္ဒပြည့်ဝတာလို့ သတ်မှတ်တယ်။ Psychological
စိတ်ပိုင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်။ Fatigue အားကုန်တာ၊ Depression
စိတ်ဓါတ်ကျတာ နဲ့ Stress စိတ်ဖိအားများတာတွေက အကြောင်းတရားတွေ
(ဟာဗယ်) မှာတော့ ကုသနည်းတွေ ရှိတယ်။ Ashwagandha or withania somnifera
ခေါ်တယ်။ Indian ginseng, Ajagandha Winter cherry လို့လဲ ခေါ်ကြတယ်။
Peppermint oil ပင်စိမ်းဆီ ကိုလဲသုံးတယ်။ Pumpkin seed ဖရုံစေ့ ကိုလဲ
သုံးတယ်။ အမှန်က ဒီဆေးတွေဟာ Aphrodisiac လိင်စိတ်-အားပေးဆေးမျိုး
• ယောက်ျားတွေမှာ သုက်လွှတ်တယ်ဆိုတာ လိင်စိတ်က အရင်ဖြစ်ရမယ်၊
စိတ်ထက်သန်လာမယ်၊ လိင်မှုကိစ္စ တခုခုလုပ်မယ်၊ နောက်ဆုံး ကျေနပ်အားရတော့မှ
သုက်လွှတ်တယ်။ ညအချိန်လွှတ်တာက အဲလိုမဟုတ်ဘူး။ လိင်စိတ်က အိပ်မက်ထဲမှာ
ပေါ်နိုင်ပေမဲ့ လိင်အင်္ဂါ မသန်မာဘဲလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။
• မိန်းမတွေဟာ ယောက်ျားနဲ့ လိင်ဆက်ဆံရင် (အော်ဂဇင်) ရဘို့
အချိန်ကြာတတ်ပေမဲ့ အိပ်ပျော်နေတုံးဆိုရင် ပိုမြန်ကြတယ်။
• ပညာပိုသင်ထားသူတွေမျာ ပိုများတာ တွေ့ရတယ်။
• Nocturnal Emissions ဆိုတဲ့ တေးဂီတအဖွဲ့ ရှိတယ်။ Wet Dream နာမည်နဲ့
ရုပ်ရှင်တွေကို အမေရိကား၊ တောင်ကိုရီးယား၊ အီရန်၊ ယူကေ၊
• Masturbation လုပ်ပေးရင် သက်သာတယ်။ ဒါပေမဲ့ လုံးဝ မဖြစ်တော့မှာတော့ မဟုတ်ဘူး။
• Extreme stress စိတ်ဖိစီးမှုများတာကို မသိစိတ်ကနေ လျှော့ဖြေပေးတာလို့
• Sexually deviant လိင်စိတ် မမှန်တာလဲ မဟုတ်ဘူး။
• Gay or straight အဖြောင့်သွားသူ၊ ဂေးဖြစ်သူ မကွဲပြားဘူး၊ အတူဘဲ။
• Wet Dream Experiences ဆိုပြီး ပဌမဆုံး အိပ်နေရင် သုက်ထွက်တဲ့
အတွေ့အကြုံတွေ ဖလှယ်ကြသူတွေလဲ ရှိတယ်။
Posted by Alex Aung at 12:06 PM No comments:
HIV, AIDS ဖြစ်ပွားနေသူများ မှ G-mail သို့မဟုတ် ဖုန်းများဖြင့် အခမဲ့ကျန်းမာရေး ဆွေးနွေး
HIV, AIDS ဖြစ်ပွားနေသူများ မှ G-mail သို့မဟုတ် ဖုန်းများဖြင့်
အခမဲ့ကျန်းမာရေး ဆွေးနွေး နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း တာဝန်ယူ
လုပ်ကိုင်နေသည့်ကမ္ဘာ့ဆရာဝန်များ အဖွဲ့ Medecins Du Monde – MDM မှ
တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးကပြောသည်။ စီမံချက်၏ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကိုယ်တိုင်
လာ၍ဆွေးနွေးရမည်ကိုရှက်သည့် ယောက်ျားချင်း လိင်တူဆက်ဆံသူ တွေနဲ့
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြု သူများကို တယ်လီဖုန်းမှ
ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ် မေးမြန်းသူ၏ အချက်အလက် အားလုံးကိုလည်း
လျှို့ဝှက်ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။ ၀က်ဘ်ဆိုဒ်အနေဖြင့် maungdoeywar.com တွင်
HIV, AIDS နှင့်ပတ်သက်၍ အသေးစိတ် အချက်အလက်များကို ဖတ်ရှု
လေ့လာနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး လိင်ဆက်ဆံရာမှတစ်ဆင့် ကူးစက်နိုင်မှုများ
နှင့်ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် အချက်များ၊ HIVအမေးအဖြေများ၊ ကာလသား
ရောဂါနှင့်ပတ်သက် သည့် အကြောင်း အရာများ ကဏ္ဍစုံလင်စွာဖော်ပြထားသည်ကို
"မောင်တို့ရွာဝက်ဘ်ဆိုဒ်မှာက ဥပမာ- ကွန်ဒုံး ပေါက်သွားရင် ဘာလုပ်ရ
မလဲဆိုတာမျိုးကို အသေးစိတ် အချက်အလက်တွေ နဲ့ အကျယ် တ၀င့်ပြန်ရှင်းပြ
ထားမှာပါ။စိတ်ငြိမ် ငြိမ်ထား သင့်ပါတယ်။ HIV ပိုးနဲ့ ထိတွေ့တိုင်း
ပိုးကူးစက်တာမဟုတ်ပါဘူး" ဟု Medicines Du Monde – MDM မှ တာဝန်ရှိသူ
ကမ္ဘာ့ ဆရာဝန်များ အဖွဲ့ MDM သည် ပြင်သစ်နိုင်ငံ၏ အဓိက ထောက်ပံ့ငွေဖြင့်
မြန်မာနိုင်ငံသို့ ၁၉၉၁ ခုနှစ်မှ စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး ၁၉၉၈
ခုနှစ်မှစတင်၍လိင်တူချင်း ဆက်ဆံ သူများနှင့် လိင်မှု ဆိုင်ရာ အသက်မွေး
၀မ်းကျောင်းလုပ်သူများအတွက် လိင်ပိုင်း ဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေး အသိပညာပေး
လုပ်ငန်းများ စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ ကျန်းမာရေးဆွေးနွေးမှုကို
သောကြာနေ့ အထိ နံနက် ၉ နာရီမှ ည ၉ နာရီ အချိန်ထိ ဖုန်း-၀၉၇၃၁၂၂၅၆၆
နှင့်hotlin-ecounselor@gmail.com တို့သို့ တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ်
မြန်မာပို့စ် - HIV, AIDS ဖြစ်ပွားနေသူများမှ Gmail သို့မဟုတ်
ဖုန်းများဖြင့် အခမဲ့ ကျန်းမာရေး ဆွေးနွေး နိုင်မည်
နောက်ဖုံးတံခါးကို ဖွင့်လိုက်တော့ဘာများတွေ့ရမယ်လို့ထင်ပါသလည်း။ အခိုင်အခံ့ဆုံးကြိုးတွေနဲ့ချည်နှောင်ထားတဲ့ အသံမပြုနိုင်အောင် တိပ်ကြီးကြီးနဲ့ကာဗာလုပ်ပေးထားတဲ့ စတီဗင်ရယ်လေ။
ဟာ....ဘာဖြစ်တာလည်း ရင်ဘတ်ထဲက စစ်ကနဲဖြစ်သွားရသေးတယ်။
ဓာတ်မီးနဲ့ စတိဗ်ရဲ့မျက်နှာကို အသေအချာထိုးကြည့်ပြီး ကျေနပ်နေတဲ့သူရကတော့ အလုပ်တစ်ခုကို အောင်မြင်အောင် လုပ်ဆောင်ပေး နိုင်လို့ပျော်ရွှင်နေတဲ့ မန်နေဂျာတစ်ယောက်လို သူဌေးအလိုကျ ဖြစ်စေတော့မယ်ထင်ပါရဲ့။
"Wow, တန်အောင်ကြည့်ရမယ့်ပွဲတစ်ခုပဲ ဒီဟာ....တကယ့်ကို တန်တယ်."
ကားပေါ်ကနေ ဆွဲချလိုက်တာ ဘုန်းကနဲအသံမည်သံနဲ့အတူ သူ..သူပြုတ်ကျလာတယ်။ အသည်းမဲ့သူလိုပါပဲ ခနိုးခနဲ့လေသံနဲ့ သူရက သူ့ကို စကားတွေနဲ့ကန်ကျောက်လိုက်သေးတယ်။ သူရဘာတွေကိုနာကြည်းနေတာလည်းမသိ တကယ်ဆို ကာယာကံရှင် ကျွန်တော့် ထက်သူက ပိုပြီးဘာကြောင့်ထူးကဲနေရတာလဲ။
စတိဗ် ထိတ်လန့်သွားတယ်ထင်ပါရဲ့ သူရကို မော့ကြည့်ပြီး မလုပ်ပါနဲ့လို့များပြောချင်နေသလား ပါးစပ်ကတလှုပ်လှုပ်နှင့်။ မျက်ဝန်းတွေ ကရော မျက်ရည်စများဝေ့နေရော့သလား။
ဓာတ်မီးကိုစွဲကိုင် ဂေါ်ပြားကိုပုခုံးမှာထမ်းရင်း ကျွန်တော်ရှေ့က ခပ်ဖြေးဖြေးလျှောက်လာသလို သူရက ကြိုးတွေနဲ့တုပ်နှောင်ထား တဲ့ စတိဗ်ကို ခေါ်ဆောင်လာနေတဲ့ ဒီအချိန်များမှာတော့ သူရဟာ စကားတွေပြောပြောပြီး ရိုက်နှက်နေတဲ့ အာဏာပါးကွက်သားနဲ့တူနေ ပြန်ပါတယ်။
ဆက်လျှောက်လာတဲ့လမ်းမှာ လေအေးတစ်ချက် အဝေ့ ရင်ဘတ်ကဇစ်ကိုဆွဲစိရင်း ရှေ့နားလှမ်းမျှော်ကြည့်တော့ ဆီးနှင်းတွေက မြက်ခင်းတွေပေါ် သစ်ပင်တွေပေါ် ဖွေးနေအောင်ကျနေတာ စိုစွတ်လို့။ ခြေလှမ်းကိုခပ်သွက်သွက်လေး လှမ်းရင်းသွားတော့ သူရကလည်း လေလေးတချွန်ချွန်နဲ့။
တောင်ကုန်းလေးအတက်ကိုအရောက် စတိဗ်ကိုခြေလှမ်းတွေသွက်စေပြန်ရင်း သူရ နောက်ကနေပြီးအမျိုးမျိုးသောစကား တွေနဲ့ထိုးနှက် တိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖြစ်က သူ့ခြေလှမ်းတွေကို တုန့်နှေးသွားစေတယ်ထင်ပါရဲ့။ ကျွန်တော်နောက်ကိုပြန်လှမ်းကြည့်လိုက်စဉ်မှာတော့ ချွေးတွေ ရွှဲနေပြီး ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းကိုပြန်စိုက်ကြည့်နေတဲ့ စတိဗ်မျက်လုံး.... မျက်လုံး ကို ကျွန်တော် ဘာကြောင့်....စိုက်မ ကြည့်ရဲပါ လိမ့်။
တောင်ကုန်းလေးတွေကိုကျော်လွှား စမ်းချောင်းလေးတွေကိုဖြတ်နဲ့ အေးစက်တဲ့ရာသီကြားမှာ စတိဗ်ချွေးပြန်နေ...တယ်။ စတိဗ်လို လူမျိုးအတွက်ကတော့ ယိုင်တိယိုင်တိုင်ခြေလှမ်းမျိုးတွေကိုဖြစ်စေတဲ့ ခရီးစဉ်ပါပဲ။ မကြာခင်ရင်ဆိုင်ရတော့မည့်အဖြစ်အတွက်လည်း သူကြောက်များကြောက်နေသလား။
'ရွံစရာကောင်းတဲ့ -ီး၊ ကန်ဖို့ကောင်းတဲ့ ဖင်!"
ရှေ့ကနေဦးဆောင်နေရာကနေ နောက်ကိုလှည့်ကြည့်မိလိုက်ပြန်တော့ မြေပြင်ပေါ်ကို လဲကျနေတဲ့စတိဗ်။ ဒါကို သူရကဒေါကန်ပြီး မြည်တွန်တောက်တီးလုပ်နေတာ။ မြင်ရပြန်တော့လည်း ကျွန်တော့်ရင်ထဲ တော်တော်ခံပြင်းသား။
'ထစမ်းပါဗျာ။ ခင်ဗျားဟန်ဆောင်နေတာ တော်သင့်ပြီ။ အခုထစမ်း။'
သူ..သူ ဒဏ်ရာရနေသူတစ်ယောက်က လဲကျနေရာမှ ကုန်းထသလိုမျိုးမြေပြင်ပေါ်ကနေ ကြိုးစားထတယ်။ လှမ်းသွားတယ် ခြေလှမ်းတွေ တစ်လှမ်းခြင်း ခပ်ယိုင်ယိုင်..။
ဟိုး....တိုက်အမြင့် ပြတင်းပေါက်ကနေ ကျွန်တော့်အရုပ်လေးပြုတ်ကျသွားတယ်။ ရင်ထဲမှာ ဟာကနဲပဲ။ ဒါပေမဲ့ အသုံးမလိုတော့တဲ့ အရုပ်ပဲ ဒီတစ်ကြိမ်မလွှင့်ပစ်လည်း နောက်ဆိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်မှ မရတော့တာ။ ဒီတော့ ပြုတ်ကျပါစေတော့။ လေပြင်းအနှော့မှာ လေဟာနယ် ထဲထိုးကျနေတဲ့ အရုပ်ကလေးကိုကြည့်ရင်း .....ရင်ထဲမောနေရုံပဲပေါ့။
အပြိုင်းအရိုင်းပေါက်နေတဲ့ မြက်ရိုင်းတောတွေရဲ့ အလယ်အရောက်မှာတော့ သူရက မြေကျင်းနက်နက်ကို အားသွန်ခွန်စိုက် တူးတယ်။ ကျွန်တော်က ဘေးကနေ မီးထိုးပြပြီးကူညီရတာ။
ဟူး........အငြိုးအာဃာတက အပြုခံရသူအတွက်တော့မသိဘူး ပြုသူတွေတောင် တော်တော်ပင်ပန်းသား။
အရေးထဲ ရာသီဥတုအေးနေတာ ဆီးကသွားချင်နေသေးတယ်။ ဒါကြောင့် ကျင်းဘေးကိုတစ်ချက်လှမ်းသွားပြီး သေးပေါက်မိနေစဉ် သူရအသံကြောင့်ရော မသိစိတ်ကလှုံ့ဆော်မှုကြောင့်ရောပဲလားမသိ အလိုလိုစောင်းငဲ့ကြည့်မိလိုက်တော့ စတိဗ်က မြေပေါ်တွားသွား ရင်းအဝေးကို ဖယ်ရှောင်ဖို့ကြိုးစားနေတာကို သူရကမြင်သွားတာဖြစ်မှာ။
'ဟေး ဆွေမင်း သူ့ကိုကြည့်လိုက်စမ်း။ သူတွားသွားနေတာကိုကြည့်လိုက်စမ်း.....ဟား ဟား။'
'အချစ်ကလေး....လာပါ......ဒီကိုလာပါ။ ကောင်းကင်ဘုံက အချစ်ကလေးကိုစောင့်နေပါတယ်။'
အို.......ကျွန်တော်သူရလုပ်သမျှကိုမတားမြစ်ဖြစ်ဘူး။ ဘာကြောင့်လည်း ကျွန်တော့်ခံစားချက်ကဘာလည်း။ မုန်းတီးမှုလား ဟန်ဆောင်သရုပ်ဆောင်မှုတွေလား။
ကြိုးတုပ်ထားတဲ့ စတိဗ်ကို ခြေထောက်ကနေ သူရဆွဲခေါ်လာတယ် မြေကျင်းရှိရာကို။တရွတ်..တရွတ်နဲ့....မြေကျင်းရှိရာကို ပါလာတာ။
မြေကျင်းနှုတ်ခမ်းလေးပေါ်မှာ စတိဗ်ပက်လက်လေးလှဲလျောင်းနေရချိန်မှာ သူရကတော့ သူ့ရဲ့ အစီအစဉ်တွေအတိုင်း ဆက်လက် ဖော်ဆောင်နေတာများ ကလည်း တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်။
မြေသားတွေက ကျင်းနှုတ်ခမ်းပေါ် အတော်အသင့်ရောက်ရှိလာချိန်မှာတော့ သူရအပေါ်ကို တက်လာတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ကို တောင်ဘာမှမပြောတော့ဘူး ရုပ်ရှင်ထဲကလူကြမ်းတစ်ယောက်လို ဆက်လက်သရုပ်ဆောင်နေတော့တာ။
'မသေခင် စီးကရက်တစ်လိပ်လောက် သောက်ချင်သေးလား..။'
'Ooops! မေ့နေလိုက်တာ စီးကရက်က ခင်ဗျားကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေတယ်လေ။'
သူရရဲ့ခြေတစ်ဖက်မြောက်တက်သွားပြီး ဘုန်းကနဲကျင်းထဲကျသွားတဲ့ စတိဗ်ကိုမကြည့်ရဲတော့သလိုပဲ။ သူဟာ ဘာမှ ပြန်လည်မတုန့်ပြန် နိုင် တဲ့အတွက်လား ဒါမှမဟုတ် အရာရာကို လက်လျော့ပြီး နေနေတဲ့ လူတစ်ယောက်လို့ခံယူသွားတာကြောင့်လား အဲဒီလိုလူရဲ့ ပုံစံမျိုး ဖြစ်နေရတာ ဘာကြောင့်များလည်း။ တကယ်ဆိုသူရုန်းကန်ထွက်ပြေးရင်ရနေသားပဲ။ ကျွန်တော်...ကျွန်တော့်ကိုချစ်များ ချစ်နေသေး တာလား။
လွှားကနဲဖြစ်ဖြစ်သွားတဲ့ သူရရဲ့ ဂေါ်ပြား လှုပ်ရှားမှုအတိုင်း စတိဗ်အပေါ်ကိုမြေသားတွေ ဖွာကနဲဖွာကနဲ ကျနေတာ သူ့ခြေချောင်း လေးတွေကိုတောင် ဖုန်းလွှမ်းစပြုလာပြီ။ စတိဗ်မျက်ဝန်းတွေက မျက်ရည်တွေစီးဆင်းလာသလို ကျွန်တော့်မျက်နှာဆီကိုစိုက်ကြည့် နေတာက မခွာတော့ဘူး...။
'ဟမ်.....ပိုက်ဆံက သစ်ပင်တွေကို မရှင်သန်စေနိုင်ဘူး ခင်ဗျားသိလား'
'ဒါပေမဲ့ လူသေပေါ်မှာတော့ ကောင်းကောင်းရှင်နိုင်တယ်ဗျ'
'ခင်ဗျား မနာမကျင်ဘဲနဲ့ ကောင်းကင်ဘုံကိုရောက်ရစေမယ်။ နောက်များမှ ကျေးဇူးမတင်နဲ့နော်...။'
ပြူတင်းပေါက်ကနေ မြေပြင်ပေါ်လဲကျနေတဲ့ အရုပ်လေးကို လှမ်းမြင်နေရတယ်။ မိုးစက်လေးတွေကလည်း တဖွဲဖွဲကျလာပြီ။ ရွှံ့ရေတွေလည်း လမ်းပေါ်မှာအိုင်စပြုလာပြီ။ ကျွန်တော့်ရင်ထဲ ဘယ်လိုမှ တင်းမထားနိုင်တော့ဘူး။ ကိုယ်မပိုင်ဆိုင်ရပေမဲ့ အသုံးမပြုချင်တော့ပေမဲ့ စင်ပေါ်မှာထားပြီး သူ့ကိုအလှကြည့်နေနိုင်သေးတာပဲ။ ပြီးတော့ သူနဲ့ပတ်သက်ခဲ့ရတဲ့ ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ ပျော်ရွှင်မှုအတိတ်ကို တမ်းတနိုင်နေသေးတာပဲ။
'အဲဒါကိုရပ်လိုက်တော့ ၊ အားလုံးပြီးသွားပြီ....အားလုံးပြီး သွားပြီ။ ငါပြောနေတယ်လေကွာ ပြီးပြီ'
ကိုယ့်ညီအကိုမောင်နှမကို တစ်ယောက်ယောက်က လည်းပင်းညှစ်နေတာကို လှမ်းမြင်လိုက်ရသလိုမျိုး၊ ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်သမျှအားလုံးကို တစ်ယောက်ယောက်ကလွှင့်ပစ်နေတာကို မြင်ရတဲ့ သူတစ်ယောက်ရဲ့ခံစားမှုမျိုး ကျွန်တော့်ရင်ထဲခံစား...ခံစားလာရတာကြောင့် သူရဆီကို အပြေးလှမ်းသွားပြီးတားမြစ်မိပါတော့တယ်။ သူရလက်ထဲက ဂေါ်ပြားကိုဆွဲယူပြီး ဟိုးအဝေးကို လွှင့်ပစ်လိုက်တယ်။
'Fuck you ဘာမှားလို့လဲကွ?'
'ရပ်ယုံလေးပဲအခုရပ်လိုက်တော့၊ ငါ အဲဒီလို မလုပ်နိုင်ဘူး၊ ပိုက်ဆံတွေ ယူသွား....မင်းအကုန်ယူသွားတော့'
နှစ်ဦးသားမြေပြင်ပေါ်ကိုလုံးထွေးပြီး အပြင်းအထန်လုံးထွေးသတ်ပုတ်ကြတာ မြက်ပင်တွေတောင် လဲပြိုကုန်ပါရော။
ဘယ်တုန်းကမှ ဒီလိုဒေါသမျိုးမထွက်ခဲ့ဖူးတဲ့ကျွန်တော် သူရကိုမြောက်တက်သွားအောင် ကန်ပစ်လိုက်တဲ့အထိ ထိုးနှက်မိသည် အထိ ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ သူတစ်ပါးကိုနာကျင်စေဖို့ဆိုတာ ဘယ်တုန်းကမှ စိတ်ထဲမှာမဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ကျွန်တော် ကိုယ့်ချစ်သူ..ချစ်သူဖြစ်ခဲ့သူကို အမှန် တကယ်ရန်ရှာနိုင်တော့မယ်ဆိုသောအခါမှာတော့ ဘယ်လိုမှကို မထိန်းနိုင်တော့ပါ။
'မင်းသွားတော့...ငါတို့ကိုထားပြီး သွားတော့။ ကားထဲမှာရှိတဲ့ပိုက်ဆံတွေအားလုံးကိုယူသွား၊ ငါမလိုချင်တော့ဘူး၊ ငါပိုက်ဆံအတွက် လှုပ်ရှားခဲ့တာမဟုတ်ဘူး၊'
'သူကလည်း ရဲကိုတိုင်မှာမဟုတ်ဘူး၊ သွားတော့..သွားတော့'
သူရမျက်ဝန်းတွေက အတန်ငယ်ငြိမ်သက်သွားပြီး ထိုးကြိတ်တာတွေလည်းမလုပ်တော့ပဲ ကျွန်တော့်မျက်နှာကိုသာ စူးစိုက်ကြည့်တယ်။ ဒါဆိုတော့ ကျွန်တော်လည်း မြေကျင်းထဲမှာ ထိတ်လန့်ခြောက်ခြားစွာ လှဲလျောင်းနေရတဲ့ စတိဗ်...ကိုကြီးရှိရာကို အပြေးလေးဆင်းပြီး ကူကယ်ရာမမဲ့အောင်ပြုလုပ်ပေးရတော့မပေါ့။
မြေသားထဲနစ်မြုပ်စပြုနေတဲ့ ခြေထောက်တွေကို အသာဖယ်....ရင်ဘတ်ပေါ်က သစ်ရွက်ကလေးတွေကိုအသာအယာဖယ်ပြီး ချစ်သူ့မျက်နှာငွေလ၀န်းကို ကျွန်တော်ဝမ်းသာအားရ ကြည့်မိရသလို ၀မ်းနည်းမျက်ရည်တွေလည်း တွေတွေကျမိရတာပေါ့ဗျာ။
'ကိုကြီးကို မုန်းလို့မဟုတ်ရပါဘူးဗျာ....ကိုကြီး ကိုကြီးကထားသွားမှာကိုမခံစားနိုင်လို့ပါ'
'ကိုကြီး.....စိတ်မဆိုးပါဘူးနော် ကျွန်တော့်ကိုလေ ကျွန်တော့်ကိုစိတ်မဆိုးပါဘူးနော်'
ကိုကြီးကလည်း ကျွန်တော့်မျက်နှာကို ၀မ်းသာမျက်ရည်တွေနဲ့အတူ မျှော်လင့်မျက်လုံးတွေဖြင့် ကြည့်မ၀ဖြစ်နေရင်း ဘာကို ထိတ်လန့် တကြားဖြစ်သွားသလည်း မသိ ရုတ်တရက်ပြူးကျယ်လာရင်း တစ်စုံတစ်ခုကို ပြောချင်နေတဲ့ ရုန်းကန်လှုပ်ရှားမှုတွေ ဖြစ်တည်လာတယ်။ ဒီတော့မှ သူ့ပါးစပ်က တိပ်ကိုခွာဖို့ ခွာပေးဖို့ သတိတရကျွန်တော်လက်လှမ်းလိုက်စဉ်မှာ ' ခွပ်...'
'Aw, ငါ -ိုးမသား...မင်းက ဘယ်ဘက်ကခံစားနေရတာလည်း!'
လေရူးသုန်သုန်မှာ ကျွန်တော့်ခေါင်းတွေချာချာလည်မှုနဲ့အတူ ခိုလှုံဖူးရာ ရင်ခွင်ကျယ်ထဲ တအိအိလဲကျသွားရတာကို နောက်ဆုံး သတိရလိုက်ရပါတော့တယ်။ အမှောင်လောကဟာ မိတ်ဆွေရင်းပဲဆိုပါတော့လေ...။
ချာချာလည်လို့ မူးမိုက်သွားခဲ့ရာက အမှောင်တိုက်ထဲကို ကျွန်တော်ထိုးစိုက်ကျရောက်သွားခဲ့ရတာ အချိန်အတော်ကြာခဲ့ရတာပေါ့။ ကျွန်တော်ဘာကြောင့်များ ရုတ်တရက်မူးဝေပြီး လဲကျသွားခဲ့ရတာလည်း ဘာဖြစ်သွားခဲ့ရတာလည်း စဉ်းစားမရခဲ့ဘူး။
အေးမြတဲ့ အရိုင်းလေတွေရဲ့ ထိခတ်မှုကို အရေပြားကတစ်ဆင့်သိလိုက်ရချိန်မှာတော့ ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံးဟာ ကြိုးတွေနှင့် တုပ်နှောင်ထားတာခံနေရကြောင်း ပြီးတော့ နှုတ်ခမ်းအစုံကလည်း အသံပြုမရအောင် တိပ်ပြားကြီးကြီးနှင့် ပိတ်ခံထားရကြောင်း ကျွန်တော်အလွန်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စွာသိလိုက်ရပါပြီ။
လမ်းတွေရဲ့ ဖြောင့်ဖြူးမှု ကြမ်းတမ်းမှုတွေရဲ့ အာရုံကို အတိအကျသိနေရတဲ့ ကားနောက်ခန်းက ကျွန်တော့်မှာ ဘာကို လုပ်ဆောင် ရမည်မှန်းမသိ၊ ဘာကြောင့်များ ကျွန်တော့်ကို ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်လာပါလိမ့်။ ဒက်ဒီတို့မှာ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ကို ရန်ညှိုးထားမဲ့သူမရှိဘူး အခုအချိန်ထိမရှိခဲ့ဘူးပါ။ ငွေကြောင့်လား ငွေကြောင့်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော့်ကားထဲမှာလည်း အတော်အသင့်ပါနေသား မဟုတ်လား။
ကားပြူတင်းကတစ်ဆင့် မြင်လိုက်ရတဲ့ နီယွန်မီးရောင်ကြောင့် မြို့စွန်လမ်းမပေါ်ကတစ်နေရာဆိုတာကို သတိပြုမိလိုက်တယ်။ ရှေ့ခန်းက ဒရိုင်ဘာနေရာကလူကတော့ အေးအေးဆေးဆေး ကားရေဒီယိုက သီချင်းကိုလိုက်ညည်းနေရင်း ဘယ်သူ့ကိုစောင့်နေသည်မသိ။
ခဏလေးအကြာမှာတော့ ကားတံခါးဖွင့်ပြီး ဆောင့်ပိတ်သံနှင့်အတူ တစ်စုံတစ်ယောက် ကားထဲဝင်ထိုင်လိုက်တာကို သတိပြုမိ လိုက်တယ်။
ဟင်......ဒီရေမွှေးနံ့ကို ရဖူးတယ်...ရဖူးခဲ့ပါတယ် ဆွေမင်း......ဆွေမင်းသုံးတဲ့ရေမွှေးနံ့။ သူများလား.... ။
ငြိမ့်ကနဲ ခပ်ဖြည်းဖြည်းမောင်းထွက်လာတဲ့ကားဟာ အရှိန်အတော်အသင့်ရလာတော့ အမြန်မောင်းတော့တာပဲ။ အဝေးပြေး လမ်းမ....ဟုတ်တယ် အဝေးပြေးလမ်းမပေါ်ရောက်လာပြီထင်ပါရဲ့။ ကားမောင်းနေသူနဲ့ ဘေးကထိုင်လိုက်လာသူတို့ စကား ကိုတပြောပြောနဲ့ တစ်ခါတစ်လေ ကြားလိုက်ရတာရှိသလို မကြားလိုက်ရတာလည်းရှိပါရဲ့။
ထို့နောက် မြက်တောတွေထဲ တိုးဝင်လာခဲ့သလို နိမ့်လိုက်မြင့်လိုက်မောင်းရင်း မြေပြင်ညီတစ်ခုကိုအရောက် ငြိမ့်ကနဲကားထိုးရပ် သွားတယ်။
ကားနောက်ခန်းတံခါးကို ခပ်ပြင်းပြင်းဖွင့်လိုက်တဲ့ အရှိန်ကြောင့်ရုတ်တရက်လန့်သွားရသလို မျက်နှာဆီကို စူးရှစွာထိုးလာတဲ့ အလင်းဓာတ်မီးကြောင့် မျက်လုံးများ ပြာဝေသွားရတာ။ နည်းနည်းကြာတော့ ခပ်ဖြည်းဖြည်းဖွင့်ကြည့်လိုက်တာ ဆွေမင်း....ဆွေမင်းရယ် သူ့ဘော်ဒါလေးရယ်ပါလား။
ကားပေါ်ကနေဆွဲချလိုက်တာများရက်ရက်စက်စက်.. နာကျင်သွားပေမဲ့ အားယူပြီးထလိုက်ရပါတယ်။ ဒီကောင်လေးက မင်းအတွက် ဘာလည်း မင်းနဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်လည်း သူက ကိုယ်နဲ့ဘာဆိုင်လို့ ပါဝင်လုပ်ဆောင်နေရတာလည်း။
"ဘယ်လိုလည်း သူဌေးမင်းရဲ့ အခုကောရယ်နိုင်သေးရဲ့လား။ မဒီလေးကတော့ဆွေးနေတော့မှာနော်"
အိုး.....မင်းစကားတွေက စွပ်စွဲချက်တွေများလှချည်လား။ တစ်ဖက်သတ်စွပ်စွဲချက်တွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကောမင်းသိရဲ့လား။ ကိုယ့်အနေနဲ့ကျတော့ ဘာမှပြန်လည်ချေပခွင့်မရှိရပါလား။ ညီ မင်းကရော ကိုယ့်ကို ဒီလိုလုပ်မှ ကျေနပ်တော့မှာလား။
သူ့မျက်နှာကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်တော့ ဘာမှခံစားချက်မရှိ အေးစက် ခံစားချက်မဲ့။
တောင်ကုန်းတွေပေါ်လည်းတက်ရတယ် ဒီခရီးဟာ ဘာခရီးပါလိမ့်။ ပင်ပန်းလိုက်တာ....ဘာလိုအပ်တာလည်း ကိုယ်ကဘာလုပ်ပေး နိုင်မှာမို့လိုက်ခဲ့ရမှာလည်း။ နောက်ကနေတွန်းထိုးလိုက်တာများ ရာဇ၀တ်သားကိုခေါ်လာတာကျနေတာပါပဲ။
ဆိုတဲ့မည်သံတွေနဲ့အတူ မြေကျင်းကိုတူးနေပြီ ဘုရား...ဘုရား ငါ့ကို ငါ့ကို မင်းတို့ဘာလုပ်မှာလည်း။ ဘ၀ဟာဒီလိုအဆုံးသတ်ရတော့ မှာလား။ ကိုယ့်အတွက် မင်းတို့ ဒီလိုစီရင်တော့မှာလား....။
ကျွန်တော် သူတို့မြေကျင်းကို ဂရုစိုက်တူးနေတုန်း လွတ်ရာလွတ်ကြောင်း ရုန်းကန်လှုပ်ရှားမိရတာပေါ့။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်..လွတ်ရမယ်။
'ဟား ဟား.....ဘော်ဒါကြီး ဒါစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းဆင်းနေတာမဟုတ်ဘူးနော်။'
ခြေထောက်က ကြိုးကို တရွတ်တိုက်ဆွဲပြီး ကျင်းဆီကိုဆွဲခေါ်သွား...သွားခြင်းနဲ့အတူ ဘုန်းကနဲပစ်ချခြင်းကို ခံရပြန်ပါတယ် မြေကျင်းထဲ။
ညီရယ် မင်းအကြည့်တွေကအေးစက်လှချီလား။ ကိုယ့်အပေါ် နည်းနည်းလေးမှ မချစ်တော့ဘူး။
ကျွန်တော့်ရင်ထဲမှာ တကယ့်ကိုနာကျင်မှုတွေ ၀မ်းနည်းဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ မျက်ရည်တွေ တွေတွေကျမိပါတော့တယ်။
မြေသားတွေ တဖွားဖွားခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ကျလာတဲ့အခါမှာတော့ ဆွေမင်းနည်းနည်းလှုပ်ရှားစပြုလာတယ်။ သူ့ဘော်ဒါကတော့ ၀မ်းသာအားရများဖြစ်နေသလားမသိ ခပ်သွက်သွက်ကျင်းကို ဖို့နေတာများ။
ခဏလေးနေတော့ ဆွေမင်းနဲ့ သူ့ဘော်ဒါ စကားများပြီး လုံးထွေးသတ်ပုတ်ကျပါရော။ ကိုယ်သိပါပြီ ကိုယ်သိနေပါတယ် ညီရယ် မင်းကိုယ့်ကို မရက်စက်နိုင်ဘူးဆိုတာ။ ကျင်းပေါ်ကနေ ဆွေမင်းခုန်ဆင်းလာတယ်။ ပြီးတော့ .....ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းတွေကို စိုက်ကြည့်ရင်းတောင်ပန်းစကားတွေဆိုတယ်။
ကိုယ်မင်းခံစားချက်ကို နားလည်ပါတယ်။ နားလည်ပေးပါတယ်....ညီ။ ကိုယ်ဝမ်းသာလိုက်တာ....မင်းကိုယ့်ကို နာကျည်းမုန်းတီးမှု မဖြစ်သေးဘူးပေါ့။ ကိုယ်လည်းထို့အတူ..အတူ။
သူ့ဘော်ဒါက ဂေါ်ပြားကိုမြောက်တင်ရင်း ဆွေမင်းကိုရိုက်ထည့်လာတာ ဖြာကနဲဆင်းလာတဲ့သွေးတွေနဲ့အတူ သူစိုက်ကျလာတယ် ကျွန်တော့်ရင်ခွင်ရှိရာ။
'Yeah, မင်းသူ့ကိုအရမ်းချစ်တယ် ဟုတ်လား? အရမ်းချစ်တယ် ဆိုတော့လည်း သူနဲ့အတူ မြှုပ်ပေးရတာပေါ့ကွာ'
ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးသားကို မြေသားတွေနဲ့ ဖို့ဘို့ကြိုးစားရင်း သူစိတ်ပြေသွားသလား စိတ်ပျက်သွားတာလားမသိ ဂေါ်ပြားကိုလွှင့်ပစ်ကာ ဓာတ်မီးကိုကျင်းထဲကန်ချ ပြီးတော့ အဝေးကိုထွက်ခွားသွားတော့တယ်။
'Fuck! ဘာကြောင့် ငါတို့ဘ၀တွေက စိတ်ညစ်စရာကောင်း နေရတာလဲ?'
ကျွန်တော်တို့ကိုထားခဲ့တော့တာပါလား။ မထားခဲ့ပါနဲ့ ကူညီပါဦးကွာ...။
ဟိုး...ကောင်းကင်ပေါ်ကို မော့ကြည့်လိုက်တော့လည်း လေရူးတသုန်သုန်နဲ့ နှင်းတွေကျနေတဲ့ အေးစက်စက်ညမှာ ကိုယ့်ချစ်သူကိုဘာမှ မလုပ်ပေးနိုင်ပါလားဆိုတဲ့ ခံစားချက်ကိုသာရရှိခဲ့ရပေါ့။ ခြေလက်တွေကလည်း ကြိုးချည်ထားတာ။ ပါးစပ်ကလည်း တိပ်နဲ့ပိတ်ထား.. အား။
အောက်ခြေကိုမမြင်ရလောက်အောင် နက်ရှိုင်းလှတဲ့ ရေကန်ကြီးထဲကို ထိုးကျသွားတယ်။ ရှေ့ကရေပြင်မှာလည်း ကိုယ့်ချစ်သူက မေ့ မြောခြင်းနဲ့အတူ တဖြည်းဖြည်းနစ်မြှုပ်လို့။ ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမှာလည်း ဘယ်လိုကယ်ဆယ်ရမလည်း ထမင်းလုံးတစ္ဆေခြောက်ခံ ရသူလို့ အလွန်တရာထိတ်လန့်ခြောက်ခြားနေရတဲ့အခြေအနေကိုရင်ဆိုင်နေရပြီ။
ဟင့်...အင် ညီ မင်းကိုကိုယ်မဆုံးရှုံးပါရစေနဲ့....။
အမှောင်......နက်မှောင်နေတဲ့ လောကကမ္ဘာကြီး။ ကျွန်တော် ဘယ်ကိုသွားရမလည်း။ ဟိုးအဝေးကိုကြည့်လိုက်တော့လည်းအမှောင် အပေါ်မော့ကြည့်လိုက်တော့လည်းအမှောင်၊ ခြေထောက်အောက်ကို ငုံ့ကြည့်လိုက်တော့လည်း အမှောင်........။
တစစ်စစ် ကိုက်ခဲနေတဲ့ခေါင်းကို ထောင်မကြည့်မိနိုင်လိုက်အောင် မူးဝေနေသေးတာ အတန်ကြာ။ အေးစက်နေတဲ့ အရာပေါ်လဲ ကျနေတာတော့လည်းမဟုတ်ပြန်ဘူး။ နှလုံးခုန်သံ တဒုတ်ဒုတ်နဲ့အတူ နွေးထွေးတဲ့ရင်ခွင်တစ်ခုထဲမှာ....။
ရာသီဥတုရဲ့ အေးစက်မှုက ဦးခေါင်းကိုနည်းနည်းပိုပြီးနာကျင်စေသလိုပါပဲ။ အပေါ်ကအုပ်မိုးထားသော သစ်ပင်များထက်က သစ်ရွက်တွေ ကလည်း တဖွဲဖွဲကျနေတာများ နှင်းမိုးစက်တွေအတိုင်း။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော် မသေးသေးပါဘူး။
အေးစက်စက် သစ်တောကြီးက ဘာကြောင့်များတိတ်ဆိတ်နေရပါလိမ့်။ တောကောင်တွေရဲ့ အသံလည်းမကြားရ ဟိန်းဟောက်သံ တောင် မမြည်။ ဒါပေမဲ့ ရဖူးနေကြ ကိုယ်သင်းနံ့သင်းသင်းလေးကြောင့် အမူးပြေ လာရတာမှာ ကျွန်တော် အသာခေါင်းထောင်ကြည့် လိုက်မိရပါတယ်။
မျက်ရည်တွေနဲ့စိုရွှဲပြီး ထိတ်လန့်နေတဲ့ မျက်ဝန်းများနဲ့စိုက်ကြည့်နေတဲ့ ကိုကြီး....ကျွန်တော့်လှုပ်ရှားမှု ခေါင်းထောင်ထလာတဲ့အပြု အမူတွေကြောင့် သူ့မျက်လုံးများဟာ ပျော်ရွှင်မှုတွေ လင်းလက်လာပါတော့တယ်။
အားအင်တွေမရှိတော့သလို ခန္ဓာကိုယ်ဟာ နုံးကျသွားတာများမယုံနိုင်ပါဘူး။ ရှိသမျှအားတွေနဲ့ အသာထက ချည်နှောင်ထားတဲ့ကြိုးတွေ ပါးစပ်မှာ ပိတ်ထားတဲ့ တိပ်တွေစတဲ့ အချုပ်အနှောင် မှန်သမျှကို ဖယ်ရှားပေးလိုက်ရတာဟာ ခရီးရှည်တစ်ခုကို သွားရသလို မောလိုက် တာ ဗျာ..။
ဟုတ်ကဲ့ပါ။ ကျွန်တော်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ မထပါရစေနဲ့ ခဏလေးငြိမ်နေပေးပါလားဗျာ။
ဒီရင်ခွင်...ရင်ခွင်ကျယ်ကြီးထဲ ခဏတာပဲဖြစ်ဖြစ် ခိုလှုံပါရစေ....ခိုလှုံခွင့်ပေးပါဦး။
ကြည်လင် တည်ငြိမ်နေတဲ့ ကန်ရေပြင်မှာ လေပြင်းတွေကြောင့် လှိုင်းကြက်ခွပ်တွေထခဲ့တယ်။ မုန်တိုင်းကြောင့်ကန်ရေပြင်ဟာ လှိုင်းထန်ခဲ့တယ်။ ကန်ရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းကိုမရောက်သေးတဲ့ လှေငယ်ပေါ်မှာ အသည်းအသန် ထိတ်လန့်နေရတဲ့ လူသားတွေက နှစ်ယောက်ထဲ။ အခုတော့ လေပြင်းမုန်တိုင်းဆဲသွားချိန်မှာတော့ လှေပေါ်မှာ မလှုပ်မယှက် ငြိမ်သက်နေကြမိရော။ အချိန်အတော်ကြာ စကားတောင်မပြော ဖြစ်ကြပါဘူးလေ။
'ညီ..ထ ကိုယ့်ကျောပေါ်တက်' ကျွန်တော့်အဖြစ်ကိုကြည့်ပြီး ချစ်စိတ်ဝင်သွားတယ်ထင်ပါ့။ သူ့ကျောပြင်ပေါ်ကိုအသာအယာတင်ပြီး ရပ်ထားခဲ့တဲ့ကားရှိရာကို ခပ်ဖြေးဖြေးရွေ့ခဲ့ကြပါတယ်။
ကိုကြီးရယ် ဒီအချိန်လေးက အရမ်းချမ်းမြေ့တာပဲ ကျွန်တော့်အတွက်။ ချစ်ရသူရဲ့ ကျောပြင်ပေါ်မှာ မှေးစက်ပြီးလိုက်ပါရတာ ဘယ် လောက်စိတ်ချမ်းမြေ့စေတယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှ မသိနိုင်ပါဘူး။ သိမယ်မထင်ပါဘူး။
ရပ်ထားတဲ့ကားကို ကားလမ်းမရှိရာဘက်ကိုအသင့်လှည့်ပြီးသားတွေ့ရတဲ့အခါ သူရ...ချစ်သူငယ်ချင်းကို ကျေးဇူးတင်ရပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် တို့တွေက သူငယ်ချင်းဖြစ်ကြတာပဲ မဟုတ်လား။ တံခါးကိုအသာဖွင့်.... အသာချပြီးထိုင်စေကာ ကျွန်တော့်ကို မျက်ဝန်း တွေနှင့် တွေတွေစိုက်ကြည့်နေတာ စူးစူးနင့်နင့်။ ဒီလိုအကြည့်တွေမှာ နစ်မြောခဲ့ရတာ ရင်ခုန်တိမ်းမူးခဲ့ရတာ။
အရှေ့ဆီက ရောင်ခြည်တွေထွန်းလင်းစ မနက်စောစောကြောင့်ထင်ပါရဲ့ အမှောင်တွေကွယ်ပျောက်စပြုလာတယ်။ ခပ်သွက်သွက် မောင်းလာတဲ့ ကိုကြီးလက်တွေက ကျွမ်းကျင်စွာ စတီယာရင် ကိုလှည့်ပတ်လို့။ ဒါပေမဲ့ မျက်လုံးတွေက နောက်ကြည့်မှန်ကနေ အဆက်မပြတ်ကြည့်နေ အကဲခတ်နေတာမကြာခဏ။
မရည်ရွယ်ခဲ့ပါဘူး။ အရိုင်းစိတ်လေးတွေဝင်ခဲ့မိတယ်လို့ပဲ သဘောထားပေးပါနော်။
ချစ်လို့ ...ချစ်ဖို့မဖြစ်နိုင် တော့မှာစိုးရိမ်လို့ ကျွန်တော်........။
'Sorry....I'm so sorry'
'Nice to meet you, Steven'
စကားတွေကိုပြန်မပြောပဲ မျက်ရည်တွေဝေ့နေတဲ့ အကြည့်မျက်ဝန်းတွေကတစ်ဆင့် ကိုကြီးရင်ဘတ်ကိုလှမ်းမြင်နေရပါတယ်။ ကျွန်တော်နားလည်ပါပြီဗျာ ကိုကြီးက ကျွန်တော့်လိုထုတ်ဖော်ပြီး မချစ်ပြတတ်သူဆိုတာ။
ကားကလေးက ခပ်သွက်သွက်နှင့် ခရီးမိုင် အတော်များများကိုဖြတ်သန်းလာခဲ့ပါပြီ။ စိတ်တွေအေးဆေးသွားပြီဆိုတော့မှ ခရီးမိုင်အတော်များများကို ညကလာခဲ့တယ်ဆိုတာ သတိပြုမိရပါတော့တယ်။
နေရောင်ခြည်ကတော့ နှင်းမှုန်တွေကြားကနေ ထွက်ပြူစပြုလာပါပြီ။ ခပ်သဲ့သဲ့လေးလင်းလို့....။
'ဒုန်း.......' ဆိုတဲ့အသံနှင့်အတူ မိတ်ဆွေကြီးဖြစ်တဲ့ အမှောင်ကမ္ဘာကြီး တစ်လှည့်ရောက်လာပြန်ပေါ့။
နောက်ကိုပဲလှည့်ကြည့်နေတဲ့ သူ့ကြောင့်လို့ အပြစ်မတင်ရက်ပါ။ ......တစ်စက္ကန့်.........၅မိနစ် .......မိနစ် ၂၀..........။
နွေးထွေးစိုစွတ်တဲ့ နှုတ်ခမ်းဆီက အတွေ့၊ ရင်ဘတ်ဆီကို ခပ်ဖွဖွတို့ထိလာတဲ့ လက်အစုံတို့ကြောင့် ကျွန်တော် မျက်မှောက်ကမ္ဘာကို ပြန်လည်ရောက်ရှိ......နိုးထလာခဲ့ပါပြီ။ အို.....နဖူးမှာ သွေးစအနည်းငယ်နဲ့ ကိုကြီး။ စိုးရိမ်မျက်ဝန်းတွေနဲ့ စိုက်ကြည့်နေတာ....အခုတော့ အပူလုံးကျသွားရောပေါ့နော်။
မျက်ရည်ကျတာ ယောက်ျားတွေရဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးလို့ ကိုကြီးကပြောခဲ့ဘူးတယ်နော်။ ဘယ်တုန်းကမှ မျက်ရည်ကျ အောင်မခံစားခဲ့မိဖူး ဘူးကျွန်တော်။ ဒါကြောင့် မျက်ရည်မကျမိအောင်ကြိုးစားရင်း အလိုလို မျက်နှာကြောတင်းလာခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့...အချစ်ဆိုတာ ရင်ထဲဝင် ရောက်လာခဲ့တဲ့အခါ ချိုချဉ်စပ်ခါးအရသာများစွာဖြင့် လူသားဆန်ခဲ့ရပါတယ်။
ဟင့်အင်.......၀မ်းသာမျက်ရည်ပါဗျာ။ ကိုကြီးလည်း မျက်ရည်မကျနဲ့တော့ ကျွန်တော်လည်း.....မ...ငို.....တော့.....ဘူး။
ကောင်းကင်ဘုံက ဘုရင်းသခင်သာကြည့်နေရင် ပြုံးရွှင်နေတဲ့ ချစ်သူနှစ်ဦး......လူသူကင်းမဲ့ရာ ဒေသကနေ လူတွေအလွန်ရှုပ်ထွေး အပူအပင်တွေများလှတဲ့ လူစုလူဝေးရှိရာ အရပ်ကို ဇွတ်တိုးဝင်ဖို့ ကားတစ်စင်းနှင့် မောင်းထွက်သွားတာကို စိတ်ပျက်လက်ပျက် နဲ့များကြည့်နေမလားပဲ။
မဟူရာရောင်တောက်ပနေတဲ့ လမ်းမတစ်လျှောက်......နေအလာ နှင်းပျောက်ချိန်။ သစ်ပင်တွေထက်မှာလည်း သစ်ရွက်တွေ ဟာစွေးစွေးနီလို့။
ကားပြူတင်းကတစ်ဆင့် တိုးဝင်လာတဲ့ လေအေးအေးလေးကြောင့် ကိုကြီးပုခုံးဆီ ကျွန်တော် တိုးလို့ကပ်မှီရင်း... ..ငြိမ်သက် လိုက်ပါသွားရပေါ့။
ကိုကြီး..'I Love You'...။
၀ရံတာ အကျယ်ကြီးမှာ တစ်ယောက်တည်းရပ်နေကာ ကောင်းကင်ပြင်ကျယ်ကြီးကို မော့ကြည့်မိသည်။ ကျယ်ပြောလိုက်တာ..။
အောက်ကိုငုံ့ကြည့်လိုက်တော့လည်း လူတွေ ကားတွေက အလျှိုလျှိုသွားလာလှုပ်ရှားနေကြသည်။
ခပ်လှမ်းလှမ်းက ပင်လယ်အနားသတ်ကိုကြည့်လိုက်တော့လည်း လှိုင်းလုံးပြာပြာတွေက တက်လိုက်ကျလိုက်..။
နေရောင်ကလည်း သိပ်မပူပြင်းတော့ အရာအားလုံးဟာ သာယာနေကြသလိုပဲ။
ပုခုံးထက်ကနွေးထွေးတဲ့လက်တစ်ဖက်ကြောင့် အနားကို ကိုကြီးရောက်လာမှန်းသိလိုက်ရသည်။ ကိုယ်သင်းနံ့မွှေးရီရီက တိမ်းမူးဖွယ်ပင်။
အင်းဟုတ်တယ်...အဲဒီကဗျာလေးက ကျွန်တော့်ခံစားမှုနဲ့ တိုက်ဆိုင်လို့ ကူးရေးထားတာဗျ။'
နေလာလည်း နှင်း မပျောက်ဘူး
တရားရှာလည်း တရား မတွေ့သေးဘူး။
ဒုက္ခကို စွန့်ပစ်ချင်သူ လူငယ်လေး တစ်ဦးပါ
မေတ္တာကို ပေးဆပ်ချင်သူ လူငယ်လေး တစ်ဦးပါ
မြားကို ချစ်ခြင်းတရားဆီ အထပ်ထပ် ပစ်လွှတ်လိုက်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တော်တော်လေးကို ကြည်နူးချမ်းမြေ့ရပါပြီ။ ဘ၀ဟာ အားလုံးအိုကေစိုပြေသွားပြီမဟုတ်လား။ လူဆိုတာ ချစ်ရမှနေပျော်မှာတဲ့။ ဟုတ်တယ် ကျွန်တော်ချစ်ရတယ် အချစ်ခံရတယ်။ ကျောင်းကိုလည်း အဆင့်မြင့်မြင့်တက်နိုင်ပြီ။ ကိုကြီးလည်း အလုပ်မှာရော ဘ၀မှာရော ဘာအနှောင့်အယှက်မှမရှိတော့ဘူး။ ပတ်ဝန်းကျင်ကတော့ အသစ်၊ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကလည်း အသစ် ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ကို တသား ထဲ ဆက်ဆံတတ်ကြတယ်။ ကျွန်တော်တို့ချစ်ခြင်းကိုလည်း ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်တစ်ခုလိုသာ သဘောထားကြတယ်။ ကဲ...ဘယ်လောက် သာယာလိုက်သလည်း။
'ဟုတ်..ကိုကြီး သွားကြတာပေါ့။ မာမီတို့ဆီ စာသွားထည့်ရင်း လက်ဆောင်လေးတွေပါ ၀ယ်ထည့်ပေးရတာပေါ့ဗျ။'
'အဲလိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင် ချစ်တော့ဘူးပေါ့လေ....ဟုတ်လား။ ဟား ဟား'
စိမ့်ကနဲအေးလာတဲ့ ပြတင်းပေါက်ကလေကြောင့် တံခါးတွေကိုပိတ် ယင်းလိပ်တွေကိုအသာချရင်း မီးပွင့်တွေကို ပိတ်လိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုကြီးက စာသွားထည့်ချင်လို့တဲ့လေ။
ညနေချမ်းလေးဟာ အအေးပိုလာတာကြောင့် နှစ်ဦးသားလှေကားတွေကတစ်ဆင့်သာ ခပ်သွက်သွက်ဆင်းဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ ကျွန်တော် တို့ခြေသံတွေဟာ တဒေါက်ဒေါက်ပေါ့။ Lobby ထဲအရောက် နှင်းဆီရနံ့လေး ထုံသင်းသွားတာကြောင့် ဝေ့၀ဲကြည့်လိုက်တော့ ကောင်လေး တစ်ယောက်က ချစ်စရာကောင်မလေးကို ချစ်ရည်ဝေ့နေတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့စိုက်ကြည့်ရင်း ပန်းစည်းတစ်ခုကို ဆက်သနေ တာကို မြင်ဖြစ် အောင်မြင်လိုက်ရသေးတော့တာ။
'ဘယ်လိုလည်း ဟန်နီ...မင်းကော ပန်းစည်းလေးမလိုချင်ဘူးလား။'
Ref: 'No Regret' Movie (Korean)
Posted by Alex Aung at 10:25 PM3comments:
Posted by Alex Aung at 8:20 PM No comments: